ကောငျးခဈြတဲ့မမ – My Blog
ကောငျးခဈြတဲ့မမ( စ ဆုံး)
ဟာ! ရငျထဲမှာ ထှကျလာတဲ့ အသံပါ။ အပွငျတော့ ထှကျမလာဘူး။ မွငျရတဲ့မွငျကှငျး အူတှေ သဲတှေ ဗွောငျးဆနျ သှားတယျ။ မမ သီတာရယျလေ အပွေးအလှား ရောကျလာပွီး ကနြေျာ့ရှေ့ တညျ့တညျ့မှာ ထဘီလှနျ ပငျတီ အောကျဆှဲခလြို့ ဘယျခြိနျထဲက အောငျ့ ထားမှနျး မသိတဲ့ ဆီးတှကေို တဖွောဖွော မွညျအောငျ ပနျးခနြတော။ နှမေို့ ပူတယျ ဆိုပွီး နခေ့ငျးအခြိနျ အိမျနောကျက ပိတောကျပငျရိပျမှာ ကွိမျပကျလကျ ကုလားထိုငျလေး ကို စံပါယျရုံလေးတှကွေား ခပြွီး ဇိမျကနြတေုနျး ဖတျဖတျ ဖတျဖတျ ဆိုတဲ့ ပွေးလာတဲ့ ဖိနပျသံ အဆုံး ကနြေျာ့ညာဘကျ ၅ ပလေောကျ အကှာ စံပါယျရုံဘေးကို မမသီတာ တဈယောကျ အထကျက ပွောခဲ့ သလို အန်တရာယျ ကိစ်စ လာရှငျးတဲ့ မွငျကှငျး။
အမှေး မဲမဲတှကွေားက ပွူးနတေဲ့ အစိကွီးနဲ့ ခုံးထနတေဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို တအံ့တသွနဲ့ ကနြျောလဲ အသကျမရှူမိအောငျ ငေးနေ မိတယျ။ အသကျသာ မရှူတာ ပေါငျကွားက ညီက အတငျး ခေါငျးထောငျ ကွညျ့တာ။ သေး စ ပေါကျတုနျးကတော့ ကိုယျ့ဟာကို ငုံ ကွညျ့နပွေီး ဆီးကုနျခါနီး ဝဒေနာ သကျသာမှ ဘေးဘီ လြှောကျကွညျ့မှ ကနြေျာ့ ကို မွငျသှားတော့တယျ။ “အို – ” ဆိုပွီး ထရမလို ထိုငျရမလို ပွာယာခတျနမှေ ကနြျောလဲ မကျြနှာလှဲဖို့ သတိ ရတော့ တယျ။ ကနြျော ပွနျလှညျ့ကွညျ့တော့ မမသီတာ မရှိတော့ပါ ဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကနြေျာ့ရငျကတော့ တဒိနျးဒိနျး ခုနျနေ သလို ညီဘှားကလဲ အလိုမကွလို့ ငိုတောငျ ငိုပွနတေယျ။ အဲ့ညက အိပျမယျ ကွံတိုငျး မမသီတာ စောကျဖုတျကွီးပဲ မွငျယောငျနလေို့ နောကျဆုံး ရအေိမျ ဝငျပွီး ထုပဈလိုကျမှပဲ အိပျလို့ ရတော့တယျဗြာ။ နောကျအခနျးကွမှ ကနြျောနဲ့ မမသီတာတို့ အဖွဈကို ပွောပွပါမယျ။
ကနြေျာ့အဖွဈလေးကို အရငျ ပွောခဲ့ပမေယျ့ကနြေျာ့ အကွောငျးကို မပွောရသေးတာမို့ အရငျဆုံး ကနြျောရဲ့အကွောငျးလေး ပွောပါ ရစနေျော။ ကနြေျာ့နာမညျက ကောငျးပွညျ့စုံ။ အိမျကရော ရငျးတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေပါ ကနြေျာ့ကို ကောငျးလို့ပဲချေါကွပါ တယျ။ ကနြေျာ့ဖဖေကေ ဦးကောငျးသျော ဌာနတဈခုက စာရေးကွီး တဈယောကျ။ ဖဖေကေ အသား လတျလတျ အရပျမွငျ့မွငျ့ ခနျ့ညား တညျကွညျတဲ့ ရုပျရညျနဲ့ မမေကေတော့ ညိုတဲ့ဘကျ လိုကျတယျ။ အရပျက ၅ ပေ ၃ လကျမလောကျ ခါးသေး ရငျခြီ မိနျးမလှ အင်ျဂါ နဲ့ ပွညျ့စုံတယျ။ မမေေ နာမညျက ဒျေါခငျတငျ့ပါ။ ကနြေျာ့မှာ အဈမ တဈယောကျ ရှိတယျ။ အဈမ နာမညျက မမွေတျနိူးခငျ။ မမနဲ့ ကနြျောက အသကျ ၇ နှဈ ကှာတယျ။ မမ မှေးပွီးတဲ့နောကျ မမေမှေ့ာ ကိုယျဝနျမရတော့လို့ နောကျထပျ ကလေး မရတော့ဘူး တောငျ ထငျနကွေတာ။ နောကျမှ ကနြေျာ့ကိုမှေး။ ယောကျြားလဲ ဖွဈပွနျ ဆိုတော့ အားလုံးက ဖူးဖူးမှုတျပေါ့။ မမကလဲ အဖေ အ မတှေေ ဆီက အမှေ ရထားလို့ မိနျးမခြော စာရငျးဝငျပဲလေ။ မမက ဆယျတနျး ကတြာနဲ့ ဆကျမတကျဘဲ အပျခြုပျ သငျပွီး ကိုယျပိုငျ အပျခြုပျဆိုငျလေးကို ဈေးထဲမှာ ဖှငျ့ထားနိုငျပွီ။ တပညျ့အဖွဈ ကနြျောက မမသီတာလို့ ချေါတဲ့ မသီတာမွငျ့ကိုချေါထားတယျ။
ကနြျောကတော့ ဆယျတနျး အောငျပွီးတာနဲ့ သူငယျခငျြး ထှနျးနိုငျတို့ ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျမှာ ဝငျလုပျပွီး စာပေး စာယူနဲ့ပဲ ကြောငျး ဆကျတကျတာ ဒုတိယနှဈ မွနျမာစာ ကြောငျးသားပေါ့။ ကနြျောက အသားက အမတေူလို့ နညျးနညျး ညိုတယျ။ အရပျက အဖလေို့ ပဲ ၅ ပေ ၈ လကျမ။ မကျြလုံး မကျြခုံး ကောငျးကောငျး ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျ မဟုတျသျောငွားလဲ တျောတျောမြားမြား မိနျးကလေးတှကေ မွောငျးပေးခငျြနကွေတယျ။ ဒါနဲ့ ကနြေျာ့မငျးသမီးလေး ဖွဈလာမယျ့ မမသီတာမွငျ့ အကွောငျး ပွောရအုနျး မယျ။ မမသီတာက ကနြေျာ့ အဈမနဲ့ ရှယျတူဘဲ။ ဒါပမေယျ့ ကံမကောငျးတာက မမသီတာ ၁၉ အရှယျမှာ ယောကျြားလေး တဈ ယောကျနဲ့ ခိုးရာ လိုကျပွေး ဖူးတယျ။ မိဘတှကေလဲ သဘောမတူ သူ့ယောကျြားကလဲ ဆေးသမား နောကျဆေးမှုနဲ့ ထောငျကြ၊ ထောငျထဲမှာသေ၊ ဒုက်ခတှေ ပှပွေီး အဖအေမအေိမျ ပွနျရောကျ လာခဲ့တာပေါ့။
ဘဝ အကြိုးပေး မကောငျးပမေယျ့ မမသီတာ က အလှ အကြိုးပေးကတော့ မိုကျတယျ။ အရပျက ၅ ပေ ၁ လကျမ နညျးနညျးလေး ပုတယျ ဆိုရပမေယျ့ ကိုယျအတိုငျးအတာကတော့ ၃၄. ၂၈. ၃၈ ဘာလို့ အဲ့လောကျ သိရသလဲ ဆိုတော့ သူတို့တှကေ စကျခြုပျသမား တှလေေ သူမြားတိုငျးရငျး မိနျးကလေးပီပီ ကိုယျ့ပစ်စညျးလဲ တိုငျးကွညျ့နကွေလို့ သိတာ။ မမသီတာက နှုတျခမျးရဲ့ဘယျဘကျအပျေါ မှာ မှဲ့လေး တဈလုံးနဲ့ ကော့နတေဲ့ မကျြတောငျ အောကျက မကျြလုံးရှဲကွီးတှကေ မွငျသူ ရငျဖိုစရာပေါ့။ မမသီတာရဲ့ အောကျ နှုတျခမျးလေးက တှဲတှဲလေး အဲ့နှုတျခမျးလေးကို တပျမကျစှာ စုပျနမျးခငျြမိတယျ။ ကနြျော ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျ လုပျနတော တဈနှဈ လောကျ ရှိမှ မမဆီကို မမသီတာ အလုပျ ဝငျတာ။ မမဆီ အလုပျ စဝငျထဲက မမသီတာရဲ့အလှကို ကနြျော ညိတှယျ နခေဲ့တာ။ လူက လဲ လူလားမွောကျစ အရှယျ လတေိုကျလို့ သဈရှကျ ကွှတောတောငျ ခံစားခငျြတဲ့ အရှယျလေ။ ကနြေျာ့မမကို မမလို့ ချေါသလို သူ့ ကိုလဲ ကနြျောက မမသီတာ လို့ပဲ ချေါတယျ။
မမသီတာက တဈခါ သဖေူးပွီမို့ ထငျတယျ ယောကျြားလေးတှကေိုဆို သိပျဟကျဟကျပကျပကျ မရှိဘူး။ ပတျဝနျးကငျြက ကဲ့ရဲ့ပွဈ တငျမှာကိုလဲ ဂရုပွုတာ နမေယျ။ ကနြေျာ့ကိုတော့ မမရဲ့မောငျမို့ ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆကျဆံ ပါတယျ။ မမသီတာကို ကပျခငျြလို့ ကွံနဖေနျ နတေဲ့ သူတှတေော့ အမြားသား တဈခြို့လဲ မုဆိုးမမို့ အကဲစမျးခငျြကွတာနမေယျ။ ထှနျးနိုငျကတောငျ “ဟကေ့ောငျ မငျးအမ အလုပျသမားက မိုကျတယျကှ” လို့ ပွောလာသေးတယျ။ “မလုပျပါနဲ့ကှာ သနားပါတယျ” ဆိုတော့ “မငျး သနားတာ ငါ သိတယျ” တဲ့။ ကနြျောလဲ သှားဖွဲ ပွနလေိုကျရတယျ။ ကနြျော အလုပျ အပွနျ မမကို ဆိုငျဝငျ ကွိုပွီး မောငျနှမ နှဈယောကျ အိမျပွနျနကွေ လေ။ တဈခါတလေ ကနြျော ရောကျလို့ သူတို့ လကျစ မပွတျသေးရငျ ထိုငျစောငျ့ရတယျ။ အဲ့အခါမြိုးဆို ကနြေျာ့ရှမှေ့ာ ထလိုကျ ထိုငျလိုကျ ကုနျးလိုကျ ကှလိုကျ လုပျနတေဲ့ မမသီတာကို မသိအောငျ ရှိုးရတာက အလုပျ တဈလုပျ။ ညညကရြငျ အလှတျရနတေဲ့ မမသီတာရဲ့ကောကျကွောငျးနဲ့ ညီဘှားကိုခြော့ရတာ အခါခါ။
ပျေါတငျလဲ မရှိတျရဲပွနျဘူးဗြ။ အိမျက အဖေ အမနေဲ့ မမက သဘောတူကွမှာ မဟုတျမှနျး သိနလေို့။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောသူ့ကို ပွဈမှားနတောတော့ မမသီတာ သိနတေယျ။ ဒါလဲ မိနျးကလေးတို့ တတျအပျတဲ့ မှေးရာပါ ပညာလား၊ ကနြျောရဲ့ မထိနျးနိုငျတဲ့ အကွညျ့ရိုငျးကွောငျ့လား မပွောတတျဘူးဗြာ။ ကနြျော ခိုးကွညျ့တာ မိသှားရငျ မကျြနှာ လှဲလှဲ သှားတယျ။ မမတို့ ချေါသလိုပဲ ကြ နေျာ့ကို ကောငျး လို့ပဲ ချေါပါတယျ။ အဲ အစက ဖွဈခဲ့တဲ့ဟာက အဲ့နကေ့ မနကျပိုငျး အိမျမှာ အန်တရာယျကငျး ဆှမျးကပျတယျ။ ဘုနျးကွီး သုံးပါးပေါ့။ နီးစပျရာ မိတျဆှတှေလေဲ ဖိတျပွီး ထမငျးနဲ့ ဧညျ့ခံ ကြှေးမှေးတာမို့ မမသီတာက လာပွီး ဝယြောဝစ်စ ဒါန ပွု တာ။ မနကျခငျး တရားနာပွီး ဧညျ့သညျတှေ ကြှေးမှေးလို့ နလေ့ညျထိ ဆေးကွ ကွောကွ သိမျးကွ ဆညျးကွပေါ့။ ကနြျောကတော့ နခေ့ငျး အရိပျမှာ အနားယူ စာဖတျနတေုနျး။ အိမျထဲက ရအေိမျမှာ လူဝငျနလေို့ မမသီတာလဲ မအောငျ့နိုငျ မထိနျး နိုငျနဲ့ ကိစ်စ လာအ ရှငျး ကနြေျာ့ကို သကျသကျ ပွသလို ဖွဈသှားတာ။ အဲ့လိုဖွဈပွီး နောကျနတှေ့ေ ဆိုငျကို ကနြျော ရောကျရငျ မမသီတာက မကျြနှာ ခငျြး မဆိုငျဘူး။ ကနြျောကလဲ သူ့မွငျရငျ သူ့ပစ်စညျးကိုပဲ ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျနတေော့တာဘဲ။ နောကျလေးငါးရကျလောကျ ကွာမှ ပွနျပွီး စကားပွောတယျ။ ကနြျောလဲ မမသီတာကို ဘယျလို ကပျရမလဲ ဒါပဲ တှေးနတေယျ။ ဆိုငျမှာက မမနဲ့ ဆိုတော့ မလှတျ ပွနျဘူး။ နောကျဆုံးတော့ ရှေးကနညျးပဲ သုံးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတော့တယျ။ အာ့ကတော့ စာပေးတာပဲ။ ကနြျော စာရေးပွီး မမကို ပွနျ ကွိုလို့ ဆိုငျပိတျ ကူတဲ့အခါ သူ့ခွငျးတောငျးထဲ စာထညျ့ ပေးလိုကျတယျ။
ပွီးတော့ မမ မသိအောငျ တဈတောငျ နဲ့ တှကျတော့ မော့အကွညျ့မှာ ခွငျးတောငျးထဲက စာကို မေးငေါ့ ပွလိုကျတော့ မမသီတာ လေ အပြိုလေး လို ရှကျပွီး မကျြနှာလေးကို ရဲလို့။ စာပေးထားခဲ့တဲ့ ညက တဈညလုံး အိပျမပြျောဘူး။ မမသာ ပွနျတုနျ့ပွနျ လာရငျ ဘယျလို ခဈြလိုကျမယျနဲ့ အတှေးတှနေဲ့ မိုးလငျးခါနီးမှ အိပျပြျောလို့ မနကျကို မမမွတျနိူး လာနှိုး ရတယျ။ “ဟယျ ထတော့လေ ကောငျး ညက မအိပျဘဲ ဘာတှေ လုပျနလေဲ” တဲ့ ရငျထဲကတော့ မမသီတာနဲ့ နှဈပါးသှား ကနတော မမ လို့ ပွနျပွောပမေယျ့ အပွငျမှာတော့ ဟီးးး လို့ ရီပွပွီး ထလိုကျ ရတယျလေ။ မနကျဆို မမက အိမျက အရငျ ထှကျတယျ။ ကနြျောကတော့ ၈ နာရီ ခှဲ လောကျမှ ဆိုငျသှားတာ။ ဒီနတေ့ော့ မနကေ့ စာပေးခဲ့တဲ့ အခွအေနေ သိခငျြလို့ “မမ ကောငျးလိုကျပို့မယျ” ဆိုတော့ မမက ဘာ ဖွဈလို့ ဆိုတဲ့ မကျြနှာနဲ့ အကွညျ့ကို “ကောငျး ထှနျးနိုငျနဲ့ လကျဘကျရညျ သောကျမို့ ခြိနျးထားလို့” ဆိုပွီး အကွောငျး ပွလိုကျ တယျ။ မမကို ဆိုငျကယျနောကျ တငျပွီး ဈေးကို လာခဲ့တဲ့ လမျးတလြှောကျ မမသီတာ ဘယျလိုမြား ကနြေျာ့ကို တုနျ့ပွနျမလဲလို့ တှေးရငျး ရငျခုနျ နမေိတယျ။
ဆိုငျရောကျတော့ မမသီတာက ဆိုငျဖှငျ့ ထားနှငျ့ပွီ။ မမနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ ကနြျောကို မွငျတော့ မကျြနှာ မထားတတျသလိုနဲ့ စားပှဲ ပျေါက ညှပျလကျစ အဝတျတှနေဲ့ အလုပျရှုပျခငျြယောငျ ဆောငျနတေယျလေ။ မမက တဈခနျး ကြျောက သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးဆီ အသှား။ ကနြျော မမသီတာနား ကပျပွီး “မမ စာဖတျပွီးပွီလားဟငျ” ဆိုတော့ မမသီတာက မမထှကျသှားတဲ့ဘကျကို ကွညျ့ရငျး မလုံမလဲနဲ့ “ကောငျး ညနကွေမှ စာရေးထားမယျ. သှားတော့ မွတျနိူးသိရငျ မကောငျးဘူး” တဲ့။ “အငျးပါ ကောငျး သှားပါ့မယျ.. မမသာ စာရေးထားနျော” ဆိုတော့ ခေါငျးညိတျ ပွတယျ။ ကနြျောလဲ မကျြစိမှိတျ ပွုံးပွတော့ မမသီတာက သကျပွငျးခပြွီး ခေါငျးငုံ့ သှား တယျ။ တဈနကေုနျ အလုပျသာ လုပျနရေတယျ စိတျက မမသီတာဆီမှာ။ ထှနျးနိုငျကတောငျ “ဟကောငျ ဒီနေ့ ဘယျလို ဖွဈနလေဲ ဟ အလှဲလှဲ အခြျောခြျောခညျြးဘဲ” တဲ့။ ညနေ အလုပျ သိမျးတာနဲ့ ကမနျးကတမျး ဆိုငျကယျ ခှတော့ “ကောငျး ဆိုငျထိုငျရအောငျ ကှာ” လို့ ချေါတဲ့ ထှနျးနိုငျကို “နောကျနမှေ့ကှာ ခု သှားစရာရှိလို့”
လို့ သူ့စကားတောငျ မစောငျ့ဘဲ ပွောရငျး ထှကျလာ လိုကျတယျ။ ဆိုငျရောကျတော့ မမမွတျနိူးက “ကောငျး ခဏ စောငျ့အုနျးနျော လကျစသပျလိုကျအုနျးမယျ” တဲ့။ ကနြျော ခေါငျးညိတျ ပွပွီး ဆိုငျထဲက ထိုငျခုံမှာထိုငျရငျး မမသီတာကို လှမျးကွညျ့နမေိတယျ။ လှ လိုကျတဲ့ မမသီတာရယျ ပနျးရောငျ ဝမျးဆကျ အကွသေားလေးနဲ့ အောကျက ကောကျကွောငျး အလှပနျးခြီက ကွညျ့မဝအောငျပါ ပဲ။ မမသီတာကလဲ ကနြေျာ့ကို ခိုးခိုး ကွညျ့နတောကို ကနြျော သိတယျ။ ခဏနေ ဆိုငျသိမျးတော့ ကနြျောလဲ ပစ်စညျတှကေို ကူပွီး ဟို ရှေ့ ဒီရှေ့ လုပျပေးနတေယျ။ အဲ့ခြိနျမှာပဲ မမသီတာက စာရှကျခေါကျလေး တဈခု မမ မသိအောငျ ကနြေျာ့လကျထဲ ထိုးထညျ့ပေး သှားတယျ။ ပြျောလိုကျတာဗြာ။ ပွောမပွတတျအောငျပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကနြေျာ့ အပြျောက အိမျရောကျလို့ အိပျရာထဲမှာ ဖတျကွညျ့ လိုကျတော့ အငှပွေ့နျပွီး ပြောကျသှားတော့တယျ။ မမသီတာ ရေးထားတာက ‘ ကောငျး မမ စာပွနျရေးလိုကျတယျနျော။ ကောငျးနဲ့ မမက မဖွဈနိုငျပါဘူး ကောငျးရယျ။ မမက အကွှပေနျးပါ။ ကောငျးလိုသူ တဈယောကျနဲ့ မတနျတော့ပါဘူး။ မွတျနိူးနဲ့ ကောငျး မိဘတှကေလဲ ကွညျဖွူမှာ မဟုတျဘူးလေ။ မမကို ခဈြရငျ ကောငျး မမကို မပွေီ့း မမထကျ အစစအရာရာသာတဲ့ တဈခွား မိနျးကလေးကို ရှာပါ ကောငျး။ မမ ကောငျးကို ပွနျမခဈြသငျ့လို့ မခဈြတာ နားလညျပေးပါ။
ကောငျး ခဈြတယျဆိုတဲ့ မမ ‘ သှားပွီ စိတျကူးယဉျ ကမ်ဘာလေး ပွိုပကျြပွီ။ ကနြျော ရငျထဲမှာ နငျ့နတေယျ။ ဘာလုပျရမလဲ မမ သီတာ ပွောသလို တဈခွား မိနျးကလေးတှေ ရှာရမလား။ မဖွဈနိုငျဘူး။ ကနြျော ခဈြတာ မမသီတာ။ မမသီတာကို ရအောငျခဈြ မယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခု ခပြွီး ကနြျော အခနျးရှိရာ အပျေါထပျက အောကျကို အဆငျး မမက မွငျတော့ လကျထဲက ဆိုငျကယျစီး ဦးထုပျကို ကွညျ့ပွီး “ကောငျး မောငျလေး အဲ့ဒါကဘယျသှားမှာလဲ” တဲ့ “အပွငျခဏ မမ” လို့ပွောပွီး ထှကျလာ။ ထှကျလာထဲက ဆုံးဖွတျပွီးသား ဆိုငျကယျကို မမသီတာတို့အိမျကို ဦးတညျတယျ။ မမသီတာတို့က မွို့ရဲ့တောငျဘကျပိုငျး ကနြျောတို့က မွောကျ ဘကျပိုငျး။ ဆိုငျကယျ ၁၅ မိနဈလောကျတော့ စီးရတယျ။ မမသီတာတို့အိမျရောကျတော့ ထဘီရငျလြားနဲ့ ရစေညျဘေးမှာ ရခြေိုးဖို့ လုပျနတေဲ့ မမသီတာ။ ကနြေျာ့မွငျတော့ အံ့အားသငျ့ နတေယျ။ “ကောငျး မောငျလေး ဘာကိစ်စလဲ” တဲ့။ အိမျထဲက ဆိုငျကယျသံ ကွားလို့ ထှကျလာတဲ့ မမသီတာ အမကေိုပဲ “ဒျေါလေး မမမွတျနိူးက ကိစ်စ ရှိလို့တဲ့.. မမသီတာကို လာချေါခိုငျးလို့” ဆိုပွီး ပွော လိုကျတယျ။ မမသီတာ အမကေ “သွျော ဟုတျလား သမီးရေ ရမွေနျမွနျ ခြိုးပွီး လိုကျသှားလိုကျလေ” တဲ့။
ကနြေျာ့ကိုလဲ အိမျရှခေ့နျးမှာ ထိုငျခိုငျးပွီး ဟငျးအိုး တနျးလနျးမို့ ဆိုပွီး နောကျပွနျဝငျ သှားတယျ။ ကနြျော ထိုငျနရောက မမသီတာ ရခြေိုးတဲ့ နရောကို မွငျနရေတယျလေ။ ရစေိုလို့ ထဘီက အသားမှာ ကပျနတေော့ ပကတိ အရှိကို မွငျနရေသလို ဖွဈနလေတေော့ အောကျက ကောငျက ငေါထှကျ လာတယျ။ အသာ ခေါငျးနှိမျပွီး ပေါငျနှဈလုံးနဲ့ ညှပျထား ရတယျဗြာ။ မမသီတာလဲ ရအေမွနျ ခြိုး ပွီး အခနျးထဲဝငျ အဝတျအစားလဲ သနပျခါးရကြေဲလေး လိမျးပွီး ပွနျထှကျလာတော့ ဟားး လှလိုကျတဲ့ မမရယျလို့ ရငျထဲက ဆိုမိ တယျ။ “အမေ သမီး လိုကျသှားလိုကျအုနျးမယျနျော” “အေး အေး သမီး သှားသှား” သူတို့ သားအမိတှေ အပွနျအလှနျ ပွောပွီး မမသီတာက ကနြေျာ့ဆိုငျကယျရဲ့အနောကျကို အတကျမှာ မမသီတာဆီက သနပျခါးနံ့လေးက နှာဝကို လာပွီး မိတျဆကျတယျ။ တဈခါတလေ ဒီလိုပဲ မမမွတျနိူးက ချေါခိုငျးနကွေ မို့ မမသီတာရော သူ့အမပေါ သံသယ မဖွဈကွဘူး။
ကနြျောကတော့ ဝုနျးဝုနျးဒိုငျးဒိုငျးနဲ့ ဆုံးဖွတျပွီး ထှကျလာပမေယျ့ အခုတကယျ သှားရမယျ ဆိုတော့ ဘယျသှားရမှနျး မသိဘူး။ ဟိုတယျ သှားဖို့ကလဲ ကနြျောတို့က ဘာမှဖွဈသေးတာ မဟုတျဘူး။ ဘုရားသှားမယျ ဆိုတော့လဲ fb ပျေါမှာ တှသေ့လို ကိုယျ့ဘာသာ ကိုယျ့သာသနာကို ညှိးနှမျးစတောမို့ မသှားခငျြ။ စားသောကျဆိုငျတှေ ထိုငျမယျ ဆိုပွနျတော့ မမသီတာကို သိတဲ့သူတှကေ ဒီမွို့မှာက အမြားသား။ ကိုယျ့ ဟာကို တိုငျပတျပွီး ဆိုငျကယျကို တှရေ့ာ စီးနတေော့ “ဟဲ့ ကောငျး ဘယျတှေ မောငျးနတောလဲ အိမျ ကို မမောငျးဘဲနဲ့” တဲ့။ အဲ့တော့မှ ကနြျောလဲ “မမ မချေါခိုငျးဘူး ကောငျး ဘာသာ ကောငျး မမကို ပွောစရာ ရှိလို့ ချေါလာတာ” “ဟာ ကှာ ကောငျး မကောငျးဘူးကှာ.. အဲ့လို မလုပျနဲ့ မမကို ပွနျပို့ပေး” တဲ့။ ရမယျ အားကွီးကွီး။ သူ့ကို ပွောစရာတှေ ပွောခငျြ လို့ ချေါလာတာကိုမြား ပွနျပို့ခိုငျး နသေေးတယျ။ သူ့ကို ပွနျမပွောဘဲ ဦးနှောကျကို အမွနျ အသုံးခြ နရေတယျ။ ကွံစမျး ဘာလုပျရမ လဲ ဘယျသှားရလဲ။ ထှကျစမျး ထှကျစမျး အကွံတှေ။ နောကျမှ သတိ သှားရတယျ။ တခွား ဟုတျရိုးလား။ ကနြျောတို့ရဲ့ ဆိုငျကယျ ပွငျဆိုငျလေးပေါ့။
ထှနျးနိုငျတို့က ဆိုငျနဲ့ အိမျ တှဲထားပမေယျ့ အိမျနဲ့က နညျးနညျး လှမျးတယျ။ ညဆို ဆိုငျထဲမှာ ထှနျးနိုငျပဲ စောငျ့အိပျတာ။ သူ့မိသားစု တှကေ အိမျမကွီးမှာပဲမို့ လှတျလပျတယျလေ။ အာ့နဲ့ ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျကို ဦးတညျလိုကျတယျ။ မမသီတာက “ကောငျး ဘယျကို လဲ” တဲ့။ မကွားခငျြယောငျ ဆောငျနလေိုကျတယျလေ။ ဆိုငျရောကျတော့ နဝေငျစ အမှောငျ လှမျးနပွေီ။ ကနြေျာ့ ဆိုငျကယျသံ ကွားတော့ ထှနျးနိုငျက အိမျကနေ ထှကျလာတယျ။ “ကောငျး ဘာလိုလို့လဲကှ” တဲ့ ကနြျောလဲ ထှနျးနိုငျလကျ ဆှဲပွီး “ဟကေ့ောငျ ငါ မမသီတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကား ပွောခငျြလို့ဟ မငျးဆိုငျထဲ ပွောလို့ ဖွဈတယျ မဟုတျလား” ဆိုတော့ ဒီကောငျက သဘော ပေါကျတယျ။ “ဘာလို့ မဖွဈရမှာလဲ.. နအေုနျး ဆိုငျသော့ သှားယူလိုကျအုနျးမယျ” ဆိုပွီး အိမျမကွီးဘကျ ပွနျသှားတော့ မမသီတာက “ကောငျးရယျ ဘာတှေ လုပျနတောလဲ.. ငါတော့ နငျ့ယုံမိတာ မှားပွီ” တဲ့။ “ဟာ မမကလဲ ခဏလေးပါ မမနဲ့ စကား ပွောခငျြလို့ပါ” ဆိုတော့ “ဒုက်ခပါပဲ ကောငျးရယျ မွတျနိူးနဲ့ ဦးလေးတို့ အဒျေါတို့ သိရငျ မမပဲ အပွဈဖွဈမှာ” လို့ ပူပနျစှာ ပွောတဲ့ မမကို ကွညျ့ပွီး သနား နမေိတယျ။ ထှနျးနိုငျ ပွနျလာပွီးတော့ ဆိုငျလေး ဖှငျ့ပေးတယျ။
“မငျးတို့အေးဆေးနကှော” တဲ့ “ကြေးဇူးပဲ” လို့ ပွောပွီး မမသီတာလကျကို ဆှဲလို့ ဆိုငျထဲ ဝငျလိုကျပွီး တံခါးပွနျပိတျ ခကျြထိုးတာ ကို မမသီတာက ကွညျ့ရငျး မလုံမလဲ စိုးရိမျနတေဲ့ မကျြနှာနဲ့ပေါ့။ ဆိုငျထဲမှာက မီးလုံးငယျ တဈပှငျ့ပဲ ထှနျးထားတာမို့ အလငျး အားနညျးနတေယျ။ မမလကျကို ဆှဲပွီး ထှနျးနိုငျအိပျတဲ့ ခုတငျမှာ နှဈဦးသား တငျပါးလှဲ ထိုငျပွီး မမလကျ နှဈဖကျကို ဆုပျကိုငျရငျး ကနေ “မမ ကောငျးကို မခဈြဘူးလား” လို့မေးတော့ ခေါငျးငုံ့ရငျးကပဲ “ကောငျးရယျ မဖွဈနိုငျတာတှေ မပွောပါနဲ့လားကှယျ” “မမရယျ ဘာလို့ မဖွဈနိုငျရမှာလဲ.. ကောငျး မမကို ခဈြတယျ” “ဟငျ့အငျး မခဈြနဲ့ ကောငျး မမတို့ နှဈယောကျလုံး စိတျဆငျးရဲရ မှာ” “ဟာ အခု မခဈြရတာကမှ စိတျဆငျးရဲတာ မမရဲ့.. မမကို ကောငျး ခဈြတယျ” လို့ပွောပွီး မမရဲ့မေးလေးကို လကျမ လကျညှိးနဲ့ ကိုငျလို့ ဆှဲမော့ လိုကျတယျ။ မော့လာတဲ့ မမရဲ့မကျြဝနျးက ရီဝလေို့ မဟတဟ နှုတျခမျးလှာလေးကို ငုံခဲလိုကျမိတော့ “အငျ” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထှကျပွီး ကနြေျာ့အနမျးကို ကနြေပျစှာ ခံယူ နတေယျ။ မမပါးစပျထဲ လြှာထညျ့ပွီး မှတေော့ မမကလဲ ပွနျပွီးတော့ လြှာနဲ့ အတှနျးအထုတျ အစုပျအဆှဲလုပျလာတယျ။
ကနြျောလဲ မနနေိုငျတော့ဘူး။ နှုတျခမျး နမျးနရေငျးက မမနို့အုံပျေါကို လကျရောကျပွီး အပျေါက ဆုပျကွညျ့တော့ ဘရာ အပြော့စား လေးကွောငျ့ အိစကျစကျ အရသာကို ထိတှေ့ ခံစားရတယျ။ ခါးကို လကျ တဈဖကျကဖကျ တဈဖကျက နို့ကိုကိုငျ နှုတျခမျးကလဲ အ နမျး မပကျြပေါ့။ နှဈယောကျသား အသကျရှူသံတှေ ပွငျးလို့ ကာမအဆိပျတှေ က ငယျထိပျ ရောကျနပွေီ။ ကနြျောလဲ အားမရတော့ တာကွောငျ့ မမရဲ့ရငျဖုံးအကငြ်္ီ နှိပျသီးတှကေို တဗွုတျဗွုတျ မွညျအောငျ ဆှဲဖွုတျလိုကျတယျ။ “အို ကောငျး ရယျ” လို့ မမနှုတျက ရရှေတျသံလေး ထှကျလာပွီး လကျနှဈဖကျ နောကျကို လြိုလို့ ဘရာခြိတျလေး ဖွုတျပေးတယျ။ အခြုပျအနှောငျက လှတျလာတဲ့ မမ နို့လေးတှကေ အပွငျကို ခုနျအထှကျ ကတှဒျပေါကျက ဗြိုငျးစောငျ့သလို စောငျ့နတေဲ့ ကနြျော မမရဲ့နို့သီးလေးကို ပွေးဟပျ လိုကျ တယျ။“အာ အာ့ ဟငျးး” ဆိုတဲ့ အသံတှေ မမဆီက ထှကျလာပွီး ရငျကော့ပွီး နို့ပေးစို့နတေဲ့ မမ တဈလုံးစို့ တဈလုံးကိုငျနဲ့ အလုပျရှုပျနတေဲ့ ကနြျောတို့ အရာရာကို မလေို့ ကာမ အရသာကို တဈဆငျ့ခငျြး တဈဆငျ့ခငျြး ရှတေို့း နကွေတယျ။ ကနြေျာ့လကျက နို့ကိုငျရာက တဈဆငျ့ မမရဲ့ပေါငျကွားဆီကို ဦးတညျလိုကျတယျ။ မိနျးမနဲ့ အပွငျမှာ တဈခါမှ မလိုးဖူးပမေယျ့ အပွာစာ အပွာ ကားတှေ ကွညျ့ထားပွီး မွငျဆရာ တငျထားတာမို့ အခု လကျတှလေု့ပျတော့ နညျးနညျးတော့ အဆငျပွသေား။
ကနြျောရဲ့ လကျက မမပေါငျကွား ဝငျတော့ မမက အတငျး ပေါငျစိထားပွီး ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး ကှာ နဲ့ ငွငျးဆနျ နတေယျ။ ကနြျော က မုနျထ နပွေီ အတငျး မမပေါငျကို ဖွဲပွီး လကျအတငျး ထညျ့တော့ နှေးနတေဲ့ မမရဲ့စောကျဖုတျ ဖောငျးဖောငျးကွီးကို လကျနဲ့ အုပျမိသှားတယျ စောကျဖုတျကွီးကို လကျဝါးနဲ့ ခပျကွမျးကွမျး ပှတျပေး လိုကျတော့ မမရယျလေ အီး အားနဲ့ တှနျ့တှနျ့ သှားတာဘဲ။ ကနြျောလဲ လကျခလညျနဲ့ ထဘီပျေါကနေ အကှဲကွောငျး တလြှောကျ ထကျအောကျ ဆှဲလိုကျတော့ ကနြျောလကျမှာ တရျော ကငျပှနျးရညျလို အရညျတှေ လူးကုနျတယျ။ မမ ထနျပွီး အရညျ ထှကျနတော။ အဲ့ခြိနျမှာ မမ သတိ ဝငျလာတယျ။ ကနြျောသူ့စောကျ ဖုတျ နှိုကျနတေဲ့ လကျကို အတငျး ဖမျးဆှဲပွီးတော့ “ကောငျး မမကို ခဈြရငျမလုပျနဲ့ကှာ” ဆိုပွီး အတငျး ရုနျးတာ။ ကနြျောကလဲ “အတငျး ခဈြလို့ပါ မမရယျ” နဲ့ အတငျး ပွနျရုနျးတာ။ နောကျမမက ကနြျောမကျြနှာကို သူ့လကျ နှဈဖကျနဲ့ ညှပျပွီး မော့စပွေီးမှ “ကောငျး မမကို ကွညျ့စမျး.. မမကို ကောငျး ခဈြလား” တဲ့။
“ကနြျောလဲ ခဈြတယျ မမ တအား ခဈြတာ” ဆိုတော့ “အငျး မမလဲ ကောငျးကို ခဈြတယျ.. ဒါပမေယျ့ အခုတော့ မမတို့ ဒီလောကျနဲ့ ပဲ တျောရအောငျနျော.. သူမြားနရောမှာ မသငျ့တျောဘူး” လို့ မမက ပွောလာတော့ “မမ တကယျ ကောငျးကို ခဈြလား” ဆိုတော့ “ခဈြတာပေါ့ ကောငျး ရယျ ကောငျးက မမကို ခဈြရငျ မမရဲ့စကား နားထောငျ ရမယျနျော” တဲ့။ ကနြျောလဲ ကလေးငယျလို ခေါငျး လေး ညိတျပွတာပေါ့။ အဲ့တော့ မမက ကနြေျာ့နဖူးကို ရှတျကနဲ့ မွညျအောငျနမျးပွီး “လိမ်မာလိုကျတာ အာ့ကွောငျ့ကောငျးကို ခဈြ တာ ကဲ ကောငျး ပွနျရအောငျ” ဆိုပွီး အဝတျတှကေို သသေပျအောငျ လုပျတယျ။ မမ ရဲ့ထဘီ ဖွနျ့ဝတျတော့ အရညျတှေ ကှကျနေ တော့ လှညျ့ ဝတျတာကို ကွညျ့ပွီး ကနြျောက ရီတော့ လူဆိုးကွောငျ့ ဆိုပွီး ကနြျောလကျမောငျးကို ဆှဲဆိတျတယျ။ နာပမေယျ့ မနာ သလိုပဲ။ ကနြေပျတဲ့ စိတျနဲ့ ပြျောနမေိတယျ။ အဲညက မမကို သူ့အိမျ ပွနျပို့ပွီး မိုးမမွငျ လမေမွငျနဲ့ ပြျောနခေဲ့တယျ။
မမသီတာနဲ့ ကနြျော ခဈြသူတှသော ဖွဈတယျ စကားလေးတောငျ နတေို့ငျး မပွောရဘူး။ ဆိုငျမှာ တှတေု့နျး မမ မသိအောငျ ခိုးပွုံးပွ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခိုးကွညျ့။ ဒီလိုပဲ နနေရေတယျ။ ထှနျးနိုငျက မေးတယျ။ “ကောငျး မငျးနဲ့ မငျးမမကဘယျလိုလဲ” တဲ့ “ဘယျလိုမှမလဲဘူး မောငျရေ မငျးဆီလာတဲ့ ညကပဲ နှဈယောကျ တှရေ့သေးတယျ” ဆိုတော့ “ကောငျး ရာ တှဖေို့ ကွံအုနျး လေ.. အခဈြဆိုတာက အမွဲ ထိတှေ့ နမှေကှ.. အနေ ဝေးရငျ အေးသှားမယျ” တဲ့။ လောလောဆယျတော့ အေးလဲ မတတျနိုငျဘူး။ တှဖေို့ကလဲ သူလဲ သူ့အလုပျနဲ့ ကိုယျကလဲ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ကိုယျက အခြိနျပေးနိုငျတောငျ သူက အခွနေေ မပေးနိုငျဘူး။ မမမွတျနိူး သိလို့ မရ အိမျက သိလို့ မရ ဆိုတော့ ပိုဆိုး။ မမနဲ့ တှခေဲ့တဲ့ တခဏတာ အတှလေ့ေးကိုပဲ ပွနျလှမျး နရေတယျ။ အဲ့လိုနဲ့ တဈလ လောကျ အကွာမှာတော့ ကနြေျာ့ကို ကံဆရာက မကျြနှာသာ ပေးလာခဲ့တယျ။ တခွား မဟုတျဘူး အမရှေ့ာက ဘုနျးတျောကွီး ကြောငျးမှာ အဖေ အမတေို့က ဇရပျ တဈဆောငျ လှူဒါနျးထားတာ ဆရာတျောကွီး မှေးနနေဲ့ တိုကျပွီး ရစေကျခပြှဲ လုပျမယျ ဆိုတော့ ကနြျောက လှဲလို့ အဖေ အမနေဲ့ မမမွတျနိူးတို့ ရှာကို သုံးရကျလောကျ သှားကွမယျပေါ့။ မမဆိုငျက ဖောကျသညျ အပကျြ မ ခံခငျြတာမို့ မမသီတာကို ဆကျဖှငျ့ ထားဖို့ လှဲထားခဲ့တယျလေ။
ဒါက ကနြေျာ့အတှကျ အကှကျ ဖွဈသှားတယျ။ မမ မရှိတော့ မမအစား ဆိုငျကို ကနြျောက သှားသှား ကွညျ့ပေးဖို့ မမမွတျနိူးက အမှာ ပါးခဲ့တော့ အဆငျ ပွပွေီလေ။ ပထမရကျကတော့ ကနြျော မမကို ဆိုငျထဲမှာ ထိုငျရငျးပဲ စကား ပွောရတယျ။ ကနြျော မမကို တှခေ့ငျြလို့ အတငျး ပူဆာလို့ နောကျဆုံးတော့ မမက လိုကျလြောပေးတယျ။ နရော ကတော့ တခွားနရော မဟုတျဘူး။ ကနြျောတို့ အိမျပဲပေါ့။ အိမျကိုက မမသီတာက မကွာခဏ လာနကွေ ဆိုတော့ ဘယျသူမှ သိပျဂရုမပွုဘူး။ တဈခုတော့ ရှိတယျ ကနြျော သှား ချေါလို့တော့ မဖွဈဘူးလေ။ ကနြျောက ဆိုငျကို တဈရကျ ခှငျ့တောငျးပွီး အိမျက စောငျ့နလေိုကျတယျ။ မမကတော့ ပုံမပကျြ ဆိုငျဖှငျ့ ပွီးမှ ကနြျောတို့ အိမျမှာ အဝတျစ ယူစရာ ရှိတယျ ဆိုပွီးဘေးက ဆိုငျကို ဆိုငျအပျခဲ့ပွီး အိမျကို လာလိုကျ အားလုံး ဒေါငျ့ကိုစနေ့ေ ရော။
မမက ၉ နာရီလောကျမှ လာမယျ့ဟာ မနကျ အိပျရာထပွီးထဲက ကနြျော ဃဏာ မငွိမျဘူး။ ၈ နာရီလောကျကတြော့ ရခြေိုးတယျ ဆပျပွာကို အထပျထပျတိုကျ ညီလေးကိုလဲ သသေခြောခြာ ဆေးကွောလို့ပေါ့ လကျထဲမှာ ညီလေး ကိုငျရငျး မမရဲ့စောကျဖုတျကွီး ကို ပွနျမွငျယောငျ လာတယျ။ ဟိုညက အနမျးတှေ အထိအတှတှေ့ကေို ပွနျသတိရတာနဲ့ ထိပျက အရညျတောငျ စို့လာတယျ။ မနေ နိုငျတော့တာနဲ့ တဈခြီ ပွီးအောငျ ထုပလိုကျတယျ။ ၉ နာရီကြျောတော့ ထီးလေး ဆောငျးလို့ မိုးပွာရောငျ ဝမျးဆကျလေးနဲ့ ရောကျလာခဲ့တယျ။ မမ အိမျထဲ ဝငျတာနဲ့ ကနြျော အပေါကျဝကနေ ပတျဝနျးကငျြကို အကဲခတျပွီး ဘယျသူမှ မရှိတာနဲ့ တံခါးကို အ မွနျပိတျ ခကျြထိုး လိုကျတယျ။ ပွီး မမလကျကို ဆှဲလို့ အပျေါထပျ ကနြေျာ့အခနျးကို ချေါလာလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့အခနျးထဲကို ရောကျတာနဲ့ မမကိုပှဖေ့ကျလို့ နမျးရငျး “ခဈြလိုကျတာ မမရယျ” ဆိုတော့ မမက အဖကျမခံဘဲ “နပေါအုနျး ကောငျး ရယျ အဝတျ တှကွေကေုနျမယျ” ဆိုတော့ ကနြျောက “ကွမှော ကွောကျရငျ ခြှတျလိုကျလေ မမ” ဆိုတော့ မကျြစောငျး ထိုးပွီး “ဒါမြိုးကြ မ သငျရဘူး တတျတယျ” တဲ့။
ပါးစပျက ပွောပမေယျ့ ကနြေျာ့အလိုတော့ လိုကျရှာပါတယျ။ မမရဲ့အကငြ်္ီနဲ့ ထဘီ ခြှတျလိုကျတော့ မမ ကိုယျပျေါမှာ ဘရာ နီရဲရဲ လေးနဲ့ ပငျတီ ပနျးရောငျလေးနဲ့ လှခငျြတိုငျး လှနတေဲ့ မမကို ရငျထဲ ဆှဲသှငျးပွီး အနမျးတှခြှေလေိုကျရငျး ခုတငျပျေါ ဆှဲတငျ လိုကျ တယျ။ မမကလဲ စိတျကို လှတျပေးလိုကျတယျ ထငျတယျ။ လူးလှနျ့လို့ ခံစားနတေယျ။ မမရဲ့ဘရာလေးကို ခြှတျပွီး လုံးဝနျးပွီး လှပ တဲ့နို့ကို ကနြျော လြှာကွမျးနဲ့ အားရပါးရ ဆှဲဆှဲ စုပျလိုကျတော့ မမလဲ ရှီုးရှီုး ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ရငျကို ကော့ကော့ ပေးနတေယျ။ မမနို့ လေးက ကလေး မတိုကျဖူးသေးတာမို့ နို့သီးခေါငျးလေးက သေးသေးလေး အဲ့ နို့သီးလေးကို ငုံလိုကျ စို့လိုကျ လုပျရာကနေ လကျက မမပေါငျကို ဖွဈညှဈရငျး ထကျအောကျ စုံဆနျ သှားနလေိုကျတယျ။ မမ က အတှကွေုံ့ ရှိပွီးသားမို့ တကယျ ခတျကှငျးလဲ ပွငျရော အိနွေ်ဒသိက်ခာတှေ အကုနျ ခှာခလြိုကျပွီး မမလကျက ကနြေျာ့ပုဆိုးဖွပွေီး လီးကို လကျနဲ့ ဆုပျပွီး ထကျအောကျ လှုပျရှားပေးတော့ မိနျးမရဲ့အထိအတှေ့ မခံဖူးတဲ့ ကနြေျာ့လီးကွီးက ဒဈကွီး ကားလို့ အစှမျးကုနျ ထောငျနရေော။ မမက ကနြေျာ့ဒဈကို သူ့လကျမနဲ့ ပှတျပွီး ဝလုံးရေး နရေငျးက “ကောငျး ရယျ မငျးဟာကွီးက မတရားပဲ” တဲ့။
“ဘာမတရားတာလဲ မမ” ဆိုတော့ “ကွီးတာလေ” တဲ့။ “ဟုတျရဲ့လား မမရယျ မမ ယောကျြား လီးနဲ့ ဘယျသူ ကွီးလဲ” “ဟာ ကွာ” တဲ့။ ရှကျလို့ မဖွတေဲ့ မမကို “ပွောပါ မမကလဲ ဘယျသူ ကွီးလဲလို့” ထပျမေးတော့မှ တိုးတိုးလေးနဲ့ “ကောငျးဟာ ကွီး တယျ” တဲ့။ ကနြျောလဲ မမရဲ့ အဖွေ ကွားတော့ ပိုစိတျထလာပွီး ကမနျးကတမျး ထပွီး မမရဲ့ပငျတီကို ဆှဲခြှတျတော့ မမက ခြှတျ လှယျအောငျ ဖငျကို ကွှပေးတယျ။ ပငျတီလေး ကြှတျသှားတာနဲ့ အမှေး မဲမဲလေးတှေ ဖုံးနတေဲ့ မမရဲ့စောကျဖုတျကွီးကို မွငျလိုကျရ တာနဲ့ စိတျခံစားမှုက အထှတျအထိပျ ရောကျပွီး ပွီးခငျြသလိုတောငျ ဖွဈသှားတယျ။ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဖွဲလိုကျတော့ အစိ ပွူး ပွူးနဲ့ ကာမရကွေညျတှေ ရှဲနတေဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို ကွညျ့ပွီး မနနေိုငျတော့တာနဲ့ ကုနျးပွီး လြှာနဲ့ လကျြလိုကျတော့ “အို အမေ့” ဆိုပွီး တှနျ့သှားပွီး မမက သူ့စောကျဖုတျကို လကျနဲ့ အတငျး အုပျပွီး “ကောငျး မလုပျနဲ့ကှာ ရှံစရာကွီး” တဲ့။ “ရှံပါဘူး မမကလဲ မမကို ကောငျးစခေငျြလို့” ပွောလဲပွော မမလကျကို အတငျး ဖယျပွီး အစိ ပွူးပွူးကွီးကို ငုံစုပျလိုကျတယျ။ ညှီစို့စို့ အနံ့ နဲ့ ငံကြိကြိ အရသာ ကို ခံစားလိုကျရပမေယျ့ မမကို ကောငျးစခေငျြတာရယျ ကွညျ့ထားတဲ့ အပွာကား ထဲက ပညာတှကေို လကျတှေ့ အသုံးခြ ကွညျ့ခငျြတာနဲ့ပဲ မနားတနျး စောကျဖုတျကွီးကို လြှာပွားကွီးနဲ့ လကျြလိုကျ လြှာနဲ့ အထဲကို ရောကျနိုငျသမြှ ထိုးထညျ့ပွီး ကစား ပေးလိုကျတယျ။
မမကလဲ ကာမစညျးစိမျကို မကျြလုံး စုံမှိတျ ကနြေျာ့ ဆံပငျတှကေို ဆှဲဆုပျပွီး တအီးအီး တအားအားနဲ့ပေါ့။ ကနြျောလဲ မနနေိုငျတော့တာနဲ့ “မမ ကောငျး ခဈြခငျြပွီ။ ခဈြခငျြပွီလို့” အသံတှတေုနျ ရငျတှခေုနျရငျး ပွောလိုကျတော့ မမက “ကောငျး ခဈြခငျြ ခဈြလေ ခဈြလေ” ဆိုပွီး ဒူးထောငျပွီး ပေါငျကား ပေးထားတော့ ကနြျောလဲ ပေါငျကွား ဝငျပွီး မမစောကျဖုတျဝ ကို လီးတပွေီ့း ဆောငျ့ထိုး လိုကျတယျ။ အာ့ အ လို့ မမဆီက အသံ ထှကျလာတယျ။ ကနြျော ထိုးသှငျး လိုကျတာက အထဲ မဝငျဘဲ အပျေါကို ခြျောပွီး မမအစိကို ကလျော ထိုးသလို ဖွဈသှားတာလေ။ မမက ခြျောသှားတဲ့ ကနြေျာ့လီးကို သူကိုယျတိုငျကိုငျပွီး အဝကို ပွနျတေ့ ပေးတယျ။ ကနြျောလဲ ခါးအားနဲ့ နောကျတဈခါ ဆောငျ့ထဲ့ လိုကျတော့ ဗွှတျ ဆို ဝငျသှားတယျ လီးတလြှောကျလုံး မကွုံ ဖူး တဲ့ အထိအတှနေဲ့ နှေးထှေး တငျးကွပျမှု အရသာကို ခံစားလိုကျရသလို မမကလဲ “အမလေး သပေါပွီ ကောငျးရယျ တအား လုပျရလားဟဲ့” ဆိုတဲ့ အသံလဲ ကွားရော ကနြေျာ့စိတျက ပိုထနျလာပွီး မမစောကျဖုတျကို အတငျး ဆောငျ့ပဈလိုကျတာ ဆယျခကျြ ကြျောကြျော လောကျပဲ ရှိမယျ ထငျတယျ လီးတလြှောကျ ကဉျြသလိုလို ဖွဈလာပွီး လီးရတှေေ ပနျးထှကျသှားတော့ လီးကို မမ စောကျဖုတျထဲကို အဆုံး ထိုးထညျ့ပွီး အတငျး ကပျထားလိုကျတယျ။
မမက လငျရဖူးတော့ ကနြေျာ့ အခွအေနကေို သိတယျ။ ကနြေျာ့ဖငျတှကေို လကျနှဈဖကျ ဆှဲပွီး ကပျထား ပေးတယျ။ နှဈယောကျ သား ခဏ ငွိမျနပွေီ အရသာ ခံနကွေတယျ။ မမက သူ့ရငျဘတျပျေါမှာ ငွိမျပွီး ဇိမျခံနတေဲ့ ကနြေျာ့ခေါငျးက ဆံပငျတှကေို ဖှဖှလေး သူ့လကျခြောငျးတှနေဲ့ ဆော့ကစားရငျးက “ကောငျး မမကို ခဈြရတာ ကောငျးလား” လို့ မေးတော မမပါး နှဈဖကျကို ဘယျညာ တ ရှတျရှတျ နမျး ရငျး “ကောငျးတယျ မမ တအား ကောငျးတာပဲ မမရော ကောငျးလားဟငျ” ဆိုတော့ ခေါငျးငွိမျ့ပွီး “အငျးး” တဲ့ “မမ ကောငျးလုပျတာ ခဏလေးနျော” ဆိုတော့ “အျော အာ့က ကောငျးကမှ မလုပျဖူးသေးတာ နောကျကရြငျ ကွာမှာပေါ့” ဆိုတော့ “မမ ကောငျး ထပျခဈြအုနျးမှာနျော မဝသေးဘူး” ဆိုတော့၊ “သဘော သဘော ကောငျးသဘော မမတော့ မှားပွီထငျတယျ” တဲ့။ “မမက ဘာမှားလို့” ဆိုတော့ “မှားတာပေါ့ ကောငျးရယျ ကောငျးက မမထကျ အမြားကွီး ငယျတယျ နောကျလူပြိုလေး မမက မုဆိုးမလေ” “ဟငျ့အငျး ကောငျး အာ့တှေ မသိဘူး မမကို ခဈြတာပဲ သိတယျ.. မမရော ကောငျးကို မခဈြဘူးလား” “အျော ကောငျး လေးရယျ ကောငျးလေးကို ခဈြလို့ ခုလို အလိုလိုကျမိတာပေါ့” တဲ့။
“မမ ကောငျးကို တကယျ ခဈြတာနျော မညာရဘူး” “မညာပါဘူး ကောငျး ရယျ နပေါအုနျး ကောငျးရော မမကို ဘယျတုနျး က စခဈြ တာလဲ” လို့မေးတော့ မမမကျြနှာလေးကို စိုကျကွညျ့ရငျးက “ဟိုလေ မမ ကောငျးကို လာပွတုနျးက” လို့ပွောတော့ မမ တဈ ယောကျ မကျြမှောငျလေး ကွုတျပွီး စဉျးစားပွီး “နပေါအုနျး မမကဘာလာ ပွတာလဲ” တဲ့။ အဲ့တော့မှ ကနြျောလဲ ဟီးးး ဆိုရီပွီး “စံပါယျရုံနားမှာ လာပွတာလေ” ဆိုတော့မှ သဘော ပေါကျပွီး “ဟာ ကောငျး ကှာ မကောငျးဘူး တျောတျော ဆိုးတယျ” တဲ့။ “ဟားဟား မဟုတျဘူးလား ကောငျးကို လာပွတာလေ” ဆိုတော့ ကနြေျာ့လကျမောငျးကို မနာအောငျ ဆှဲကိုကျပွီး “သှားးအဲ့နကေ့ ရှကျလိုကျတာ မပွောနဲ့” တဲ့။ ပွောဆို နရေငျးက စိတျပွနျထ လာတော့ “မမ ခဈြအုနျးမယျနျော” ဆိုတော့ မမက ခေါငျးညိတျ ပွ တယျ။ “မမ ကောငျး အောကျကနမေယျ” ဆိုတော့ “အငျးပါ” တဲ့။ ကနြျော အောကျက ပကျလကျ လှနျအိပျပေးတော့ မမက အပျေါ က ဆောငျ့ကွောငျ့ ထိုငျပွီး လကျတဈဖကျက လီးကို ကိုငျပွီး အဝတပွေီ့း အသာ ဖိသှငျးတယျ။ “အာ ကောငျးရယျ မငျးဟာက ကွီး တယျကှာ” တဲ့။ “ကွီးတာ မကောငျးလို့လား မမ” ဆိုတော့ “နာတယျကှ” တဲ့။ အဲ့အသံလဲ ကွားရော မမခါးကို ကိုငျပွီးတော့ အောကျကနေ ပငျ့ဆောငျ့ လိုကျတယျ။
“အား သပေီ ကောငျးရယျ သူ့အသား မဟုတျတိုငျး” တဲ့။ မကျြနှာလေး ရှူံ့လို့ ပွောနတေဲ့ မမကို ကာမစိတျတှေ ထနျနတေဲ့ ကနြျော ဘာမှ မပွောဘဲ အတငျး အောကျကနေ ပငျ့ဆောငျ့ နတေော့တာပဲ။ မမကလဲ ပွနျဆောငျ့ လိုးပေးတယျ။ ကနြျောရဲ့အဆောငျ့ နားခြိနျ ဆို မမက ကွိတျပွီး ပှတျတာ ခံလို့ ကောငျးလိုကျတာ။ လီးကို စောကျဖုတျထဲ အဆုံးထိ ထညျ့ပွီး ဝိုကျဝိုကျပွီး ကွိတျတာက မမအစိ ကိုခသြေလိုမို့ ထငျတယျ မမ တအား ကွိုကျပုံပဲ။ မမနဲ့ ကနြျော အဲ့နကေ့ သုံးခြီ သုံးလား လိုးကွတယျ။ ပွီးရမေိုးခြိုးပွီး မမမွတျနိူးရဲ့ မှနျတငျခုံက ပစ်စညျးတှနေဲ့ ပွနျပွငျပွီး မမလဲ ဆိုငျကို ပွနျတယျ။ နောကျမို့ဆို ကနြျော ကွမျး ထားလို့ မကျြနှာမှာ လိမျးထားတဲ့ မှုနျ နံ့သာတှေ တဈစကျမှ မကနျြဘူးလေ။
နောကျနမှေ့ာပဲ အဖတေို့ ပွနျရောကျ လာပွီး မမနဲ့ ကနြျော ဆုံဖို့ အခှငျ့ရေး မရသလို မမလဲ သူ့အိမျက သဘောတူတဲ့ လူနဲ့ လကျထပျ ပွီး သူ့ယောကျြား တာဝနျကတြဲ့ မွို့ကို လိုကျသှားလို့ ကနြေျာ့ရဲ့ အခဈြဦးဆိုဆို ကာမ အစ ပွောပွော မမနဲ့ ဇာတျလမျးက ပွညျ့ဖုံး ကားလေး ခလြိုကျ ရပါတော့တယျ။ ကာလတှေ ဘယျလောကျ ကွာကွာ ပိတောကျရိပျနဲ့ စံပါယျရုံလေးနား ရောကျရငျတော့ ရငျခုနျ သံ စညျးခကျြ ခပျသှကျသှကျ ဖွဈခဲ့ရတဲ့ မမနဲ့ ခဈြဇာတျလမျးလေးကို သတိရ နမေိတယျ ဆိုတာကို ဒီနရောကနေ ဝနျခံ လိုကျပါ တယျ ခငျဗြာ။ ။ ပွီးပါပွီ
ဟာ! ရင်ထဲမှာ ထွက်လာတဲ့ အသံပါ။ အပြင်တော့ ထွက်မလာဘူး။ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်း အူတွေ သဲတွေ ဗြောင်းဆန် သွားတယ်။ မမ သီတာရယ်လေ အပြေးအလွှား ရောက်လာပြီး ကျနော့်ရှေ့ တည့်တည့်မှာ ထဘီလှန် ပင်တီ အောက်ဆွဲချလို့ ဘယ်ချိန်ထဲက အောင့် ထားမှန်း မသိတဲ့ ဆီးတွေကို တဖြောဖြော မြည်အောင် ပန်းချနေတာ။ နွေမို့ ပူတယ် ဆိုပြီး နေ့ခင်းအချိန် အိမ်နောက်က ပိတောက်ပင်ရိပ်မှာ ကြိမ်ပက်လက် ကုလားထိုင်လေး ကို စံပါယ်ရုံလေးတွေကြား ချပြီး ဇိမ်ကျနေတုန်း ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဆိုတဲ့ ပြေးလာတဲ့ ဖိနပ်သံ အဆုံး ကျနော့်ညာဘက် ၅ ပေလောက် အကွာ စံပါယ်ရုံဘေးကို မမသီတာ တစ်ယောက် အထက်က ပြောခဲ့ သလို အန္တရာယ် ကိစ္စ လာရှင်းတဲ့ မြင်ကွင်း။
အမွှေး မဲမဲတွေကြားက ပြူးနေတဲ့ အစိကြီးနဲ့ ခုံးထနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို တအံ့တသြနဲ့ ကျနော်လဲ အသက်မရှူမိအောင် ငေးနေ မိတယ်။ အသက်သာ မရှူတာ ပေါင်ကြားက ညီက အတင်း ခေါင်းထောင် ကြည့်တာ။ သေး စ ပေါက်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဟာကို ငုံ ကြည့်နေပြီး ဆီးကုန်ခါနီး ဝေဒနာ သက်သာမှ ဘေးဘီ လျှောက်ကြည့်မှ ကျနော့် ကို မြင်သွားတော့တယ်။ “အို – ” ဆိုပြီး ထရမလို ထိုင်ရမလို ပြာယာခတ်နေမှ ကျနော်လဲ မျက်နှာလွှဲဖို့ သတိ ရတော့ တယ်။ ကျနော် ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ မမသီတာ မရှိတော့ပါ ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရင်ကတော့ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေ သလို ညီဘွားကလဲ အလိုမကြလို့ ငိုတောင် ငိုပြနေတယ်။ အဲ့ညက အိပ်မယ် ကြံတိုင်း မမသီတာ စောက်ဖုတ်ကြီးပဲ မြင်ယောင်နေလို့ နောက်ဆုံး ရေအိမ် ဝင်ပြီး ထုပစ်လိုက်မှပဲ အိပ်လို့ ရတော့တယ်ဗျာ။ နောက်အခန်းကြမှ ကျနော်နဲ့ မမသီတာတို့ အဖြစ်ကို ပြောပြပါမယ်။
ကျနော့်အဖြစ်လေးကို အရင် ပြောခဲ့ပေမယ့်ကျနော့် အကြောင်းကို မပြောရသေးတာမို့ အရင်ဆုံး ကျနော်ရဲ့အကြောင်းလေး ပြောပါ ရစေနော်။ ကျနော့်နာမည်က ကောင်းပြည့်စုံ။ အိမ်ကရော ရင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပါ ကျနော့်ကို ကောင်းလို့ပဲခေါ်ကြပါ တယ်။ ကျနော့်ဖေဖေက ဦးကောင်းသော် ဌာနတစ်ခုက စာရေးကြီး တစ်ယောက်။ ဖေဖေက အသား လတ်လတ် အရပ်မြင့်မြင့် ခန့်ညား တည်ကြည်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ မေမေကတော့ ညိုတဲ့ဘက် လိုက်တယ်။ အရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မလောက် ခါးသေး ရင်ချီ မိန်းမလှ အင်္ဂါ နဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ မေမေ နာမည်က ဒေါ်ခင်တင့်ပါ။ ကျနော့်မှာ အစ်မ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ အစ်မ နာမည်က မေမြတ်နိူးခင်။ မမနဲ့ ကျနော်က အသက် ၇ နှစ် ကွာတယ်။ မမ မွေးပြီးတဲ့နောက် မေမေ့မှာ ကိုယ်ဝန်မရတော့လို့ နောက်ထပ် ကလေး မရတော့ဘူး တောင် ထင်နေကြတာ။ နောက်မှ ကျနော့်ကိုမွေး။ ယောက်ျားလဲ ဖြစ်ပြန် ဆိုတော့ အားလုံးက ဖူးဖူးမှုတ်ပေါ့။ မမကလဲ အဖေ အ မေတွေ ဆီက အမွေ ရထားလို့ မိန်းမချော စာရင်းဝင်ပဲလေ။ မမက ဆယ်တန်း ကျတာနဲ့ ဆက်မတက်ဘဲ အပ်ချုပ် သင်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အပ်ချုပ်ဆိုင်လေးကို ဈေးထဲမှာ ဖွင့်ထားနိုင်ပြီ။ တပည့်အဖြစ် ကျနော်က မမသီတာလို့ ခေါ်တဲ့ မသီတာမြင့်ကိုခေါ်ထားတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဆယ်တန်း အောင်ပြီးတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ထွန်းနိုင်တို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မှာ ဝင်လုပ်ပြီး စာပေး စာယူနဲ့ပဲ ကျောင်း ဆက်တက်တာ ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ ကျောင်းသားပေါ့။ ကျနော်က အသားက အမေတူလို့ နည်းနည်း ညိုတယ်။ အရပ်က အဖေ့လို ပဲ ၅ ပေ ၈ လက်မ။ မျက်လုံး မျက်ခုံး ကောင်းကောင်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် မဟုတ်သော်ငြားလဲ တော်တော်များများ မိန်းကလေးတွေက မြောင်းပေးချင်နေကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော့်မင်းသမီးလေး ဖြစ်လာမယ့် မမသီတာမြင့် အကြောင်း ပြောရအုန်း မယ်။ မမသီတာက ကျနော့် အစ်မနဲ့ ရွယ်တူဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတာက မမသီတာ ၁၉ အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေး တစ် ယောက်နဲ့ ခိုးရာ လိုက်ပြေး ဖူးတယ်။ မိဘတွေကလဲ သဘောမတူ သူ့ယောက်ျားကလဲ ဆေးသမား နောက်ဆေးမှုနဲ့ ထောင်ကျ၊ ထောင်ထဲမှာသေ၊ ဒုက္ခတွေ ပွေပြီး အဖေအမေအိမ် ပြန်ရောက် လာခဲ့တာပေါ့။
ဘဝ အကျိုးပေး မကောင်းပေမယ့် မမသီတာ က အလှ အကျိုးပေးကတော့ မိုက်တယ်။ အရပ်က ၅ ပေ ၁ လက်မ နည်းနည်းလေး ပုတယ် ဆိုရပေမယ့် ကိုယ်အတိုင်းအတာကတော့ ၃၄. ၂၈. ၃၈ ဘာလို့ အဲ့လောက် သိရသလဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေက စက်ချုပ်သမား တွေလေ သူများတိုင်းရင်း မိန်းကလေးပီပီ ကိုယ့်ပစ္စည်းလဲ တိုင်းကြည့်နေကြလို့ သိတာ။ မမသီတာက နှုတ်ခမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ် မှာ မှဲ့လေး တစ်လုံးနဲ့ ကော့နေတဲ့ မျက်တောင် အောက်က မျက်လုံးရွဲကြီးတွေက မြင်သူ ရင်ဖိုစရာပေါ့။ မမသီတာရဲ့ အောက် နှုတ်ခမ်းလေးက တွဲတွဲလေး အဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို တပ်မက်စွာ စုပ်နမ်းချင်မိတယ်။ ကျနော် ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် လုပ်နေတာ တစ်နှစ် လောက် ရှိမှ မမဆီကို မမသီတာ အလုပ် ဝင်တာ။ မမဆီ အလုပ် စဝင်ထဲက မမသီတာရဲ့အလှကို ကျနော် ညိတွယ် နေခဲ့တာ။ လူက လဲ လူလားမြောက်စ အရွယ် လေတိုက်လို့ သစ်ရွက် ကြွေတာတောင် ခံစားချင်တဲ့ အရွယ်လေ။ ကျနော့်မမကို မမလို့ ခေါ်သလို သူ့ ကိုလဲ ကျနော်က မမသီတာ လို့ပဲ ခေါ်တယ်။
မမသီတာက တစ်ခါ သေဖူးပြီမို့ ထင်တယ် ယောက်ျားလေးတွေကိုဆို သိပ်ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှိဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကဲ့ရဲ့ပြစ် တင်မှာကိုလဲ ဂရုပြုတာ နေမယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ မမရဲ့မောင်မို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံ ပါတယ်။ မမသီတာကို ကပ်ချင်လို့ ကြံနေဖန် နေတဲ့ သူတွေတော့ အများသား တစ်ချို့လဲ မုဆိုးမမို့ အကဲစမ်းချင်ကြတာနေမယ်။ ထွန်းနိုင်ကတောင် “ဟေ့ကောင် မင်းအမ အလုပ်သမားက မိုက်တယ်ကွ” လို့ ပြောလာသေးတယ်။ “မလုပ်ပါနဲ့ကွာ သနားပါတယ်” ဆိုတော့ “မင်း သနားတာ ငါ သိတယ်” တဲ့။ ကျနော်လဲ သွားဖြဲ ပြနေလိုက်ရတယ်။ ကျနော် အလုပ် အပြန် မမကို ဆိုင်ဝင် ကြိုပြီး မောင်နှမ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်နေကြ လေ။ တစ်ခါတလေ ကျနော် ရောက်လို့ သူတို့ လက်စ မပြတ်သေးရင် ထိုင်စောင့်ရတယ်။ အဲ့အခါမျိုးဆို ကျနော့်ရှေ့မှာ ထလိုက် ထိုင်လိုက် ကုန်းလိုက် ကွလိုက် လုပ်နေတဲ့ မမသီတာကို မသိအောင် ရှိုးရတာက အလုပ် တစ်လုပ်။ ညညကျရင် အလွတ်ရနေတဲ့ မမသီတာရဲ့ကောက်ကြောင်းနဲ့ ညီဘွားကိုချော့ရတာ အခါခါ။
ပေါ်တင်လဲ မရှိတ်ရဲပြန်ဘူးဗျ။ အိမ်က အဖေ အမေနဲ့ မမက သဘောတူကြမှာ မဟုတ်မှန်း သိနေလို့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သူ့ကို ပြစ်မှားနေတာတော့ မမသီတာ သိနေတယ်။ ဒါလဲ မိန်းကလေးတို့ တတ်အပ်တဲ့ မွေးရာပါ ပညာလား၊ ကျနော်ရဲ့ မထိန်းနိုင်တဲ့ အကြည့်ရိုင်းကြောင့်လား မပြောတတ်ဘူးဗျာ။ ကျနော် ခိုးကြည့်တာ မိသွားရင် မျက်နှာ လွှဲလွှဲ သွားတယ်။ မမတို့ ခေါ်သလိုပဲ ကျ နော့်ကို ကောင်း လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ အဲ အစက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာက အဲ့နေ့က မနက်ပိုင်း အိမ်မှာ အန္တရာယ်ကင်း ဆွမ်းကပ်တယ်။ ဘုန်းကြီး သုံးပါးပေါ့။ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေတွေလဲ ဖိတ်ပြီး ထမင်းနဲ့ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးတာမို့ မမသီတာက လာပြီး ဝေယျာဝစ္စ ဒါန ပြု တာ။ မနက်ခင်း တရားနာပြီး ဧည့်သည်တွေ ကျွေးမွေးလို့ နေ့လည်ထိ ဆေးကြ ကြောကြ သိမ်းကြ ဆည်းကြပေါ့။ ကျနော်ကတော့ နေ့ခင်း အရိပ်မှာ အနားယူ စာဖတ်နေတုန်း။ အိမ်ထဲက ရေအိမ်မှာ လူဝင်နေလို့ မမသီတာလဲ မအောင့်နိုင် မထိန်း နိုင်နဲ့ ကိစ္စ လာအ ရှင်း ကျနော့်ကို သက်သက် ပြသလို ဖြစ်သွားတာ။ အဲ့လိုဖြစ်ပြီး နောက်နေ့တွေ ဆိုင်ကို ကျနော် ရောက်ရင် မမသီတာက မျက်နှာ ချင်း မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်ကလဲ သူ့မြင်ရင် သူ့ပစ္စည်းကိုပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေတော့တာဘဲ။ နောက်လေးငါးရက်လောက် ကြာမှ ပြန်ပြီး စကားပြောတယ်။ ကျနော်လဲ မမသီတာကို ဘယ်လို ကပ်ရမလဲ ဒါပဲ တွေးနေတယ်။ ဆိုင်မှာက မမနဲ့ ဆိုတော့ မလွတ် ပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရှေးကနည်းပဲ သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ အာ့ကတော့ စာပေးတာပဲ။ ကျနော် စာရေးပြီး မမကို ပြန် ကြိုလို့ ဆိုင်ပိတ် ကူတဲ့အခါ သူ့ခြင်းတောင်းထဲ စာထည့် ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မမ မသိအောင် တစ်တောင် နဲ့ တွက်တော့ မော့အကြည့်မှာ ခြင်းတောင်းထဲက စာကို မေးငေါ့ ပြလိုက်တော့ မမသီတာ လေ အပျိုလေး လို ရှက်ပြီး မျက်နှာလေးကို ရဲလို့။ စာပေးထားခဲ့တဲ့ ညက တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဘူး။ မမသာ ပြန်တုန့်ပြန် လာရင် ဘယ်လို ချစ်လိုက်မယ်နဲ့ အတွေးတွေနဲ့ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်လို့ မနက်ကို မမမြတ်နိူး လာနှိုး ရတယ်။ “ဟယ် ထတော့လေ ကောင်း ညက မအိပ်ဘဲ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ” တဲ့ ရင်ထဲကတော့ မမသီတာနဲ့ နှစ်ပါးသွား ကနေတာ မမ လို့ ပြန်ပြောပေမယ့် အပြင်မှာတော့ ဟီးးး လို့ ရီပြပြီး ထလိုက် ရတယ်လေ။ မနက်ဆို မမက အိမ်က အရင် ထွက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ၈ နာရီ ခွဲ လောက်မှ ဆိုင်သွားတာ။ ဒီနေ့တော့ မနေ့က စာပေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေ သိချင်လို့ “မမ ကောင်းလိုက်ပို့မယ်” ဆိုတော့ မမက ဘာ ဖြစ်လို့ ဆိုတဲ့ မျက်နှာနဲ့ အကြည့်ကို “ကောင်း ထွန်းနိုင်နဲ့ လက်ဘက်ရည် သောက်မို့ ချိန်းထားလို့” ဆိုပြီး အကြောင်း ပြလိုက် တယ်။ မမကို ဆိုင်ကယ်နောက် တင်ပြီး ဈေးကို လာခဲ့တဲ့ လမ်းတလျှောက် မမသီတာ ဘယ်လိုများ ကျနော့်ကို တုန့်ပြန်မလဲလို့ တွေးရင်း ရင်ခုန် နေမိတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ မမသီတာက ဆိုင်ဖွင့် ထားနှင့်ပြီ။ မမနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ ကျနော်ကို မြင်တော့ မျက်နှာ မထားတတ်သလိုနဲ့ စားပွဲ ပေါ်က ညှပ်လက်စ အဝတ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်လေ။ မမက တစ်ခန်း ကျော်က သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆီ အသွား။ ကျနော် မမသီတာနား ကပ်ပြီး “မမ စာဖတ်ပြီးပြီလားဟင်” ဆိုတော့ မမသီတာက မမထွက်သွားတဲ့ဘက်ကို ကြည့်ရင်း မလုံမလဲနဲ့ “ကောင်း ညနေကြမှ စာရေးထားမယ်. သွားတော့ မြတ်နိူးသိရင် မကောင်းဘူး” တဲ့။ “အင်းပါ ကောင်း သွားပါ့မယ်.. မမသာ စာရေးထားနော်” ဆိုတော့ ခေါင်းညိတ် ပြတယ်။ ကျနော်လဲ မျက်စိမှိတ် ပြုံးပြတော့ မမသီတာက သက်ပြင်းချပြီး ခေါင်းငုံ့ သွား တယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်သာ လုပ်နေရတယ် စိတ်က မမသီတာဆီမှာ။ ထွန်းနိုင်ကတောင် “ဟကောင် ဒီနေ့ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲ ဟ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ချည်းဘဲ” တဲ့။ ညနေ အလုပ် သိမ်းတာနဲ့ ကမန်းကတမ်း ဆိုင်ကယ် ခွတော့ “ကောင်း ဆိုင်ထိုင်ရအောင် ကွာ” လို့ ခေါ်တဲ့ ထွန်းနိုင်ကို “နောက်နေ့မှကွာ ခု သွားစရာရှိလို့”
လို့ သူ့စကားတောင် မစောင့်ဘဲ ပြောရင်း ထွက်လာ လိုက်တယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ မမမြတ်နိူးက “ကောင်း ခဏ စောင့်အုန်းနော် လက်စသပ်လိုက်အုန်းမယ်” တဲ့။ ကျနော် ခေါင်းညိတ် ပြပြီး ဆိုင်ထဲက ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရင်း မမသီတာကို လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ လှ လိုက်တဲ့ မမသီတာရယ် ပန်းရောင် ဝမ်းဆက် အကြေသားလေးနဲ့ အောက်က ကောက်ကြောင်း အလှပန်းချီက ကြည့်မဝအောင်ပါ ပဲ။ မမသီတာကလဲ ကျနော့်ကို ခိုးခိုး ကြည့်နေတာကို ကျနော် သိတယ်။ ခဏနေ ဆိုင်သိမ်းတော့ ကျနော်လဲ ပစ္စည်တွေကို ကူပြီး ဟို ရွှေ့ ဒီရွှေ့ လုပ်ပေးနေတယ်။ အဲ့ချိန်မှာပဲ မမသီတာက စာရွက်ခေါက်လေး တစ်ခု မမ မသိအောင် ကျနော့်လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေး သွားတယ်။ ပျော်လိုက်တာဗျာ။ ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အပျော်က အိမ်ရောက်လို့ အိပ်ရာထဲမှာ ဖတ်ကြည့် လိုက်တော့ အငွေ့ပြန်ပြီး ပျောက်သွားတော့တယ်။ မမသီတာ ရေးထားတာက ‘ ကောင်း မမ စာပြန်ရေးလိုက်တယ်နော်။ ကောင်းနဲ့ မမက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကောင်းရယ်။ မမက အကြွေပန်းပါ။ ကောင်းလိုသူ တစ်ယောက်နဲ့ မတန်တော့ပါဘူး။ မြတ်နိူးနဲ့ ကောင်း မိဘတွေကလဲ ကြည်ဖြူမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ မမကို ချစ်ရင် ကောင်း မမကို မေ့ပြီး မမထက် အစစအရာရာသာတဲ့ တစ်ခြား မိန်းကလေးကို ရှာပါ ကောင်း။ မမ ကောင်းကို ပြန်မချစ်သင့်လို့ မချစ်တာ နားလည်ပေးပါ။
ကောင်း ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ မမ ‘ သွားပြီ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာလေး ပြိုပျက်ပြီ။ ကျနော် ရင်ထဲမှာ နင့်နေတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ မမ သီတာ ပြောသလို တစ်ခြား မိန်းကလေးတွေ ရှာရမလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော် ချစ်တာ မမသီတာ။ မမသီတာကို ရအောင်ချစ် မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချပြီး ကျနော် အခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်က အောက်ကို အဆင်း မမက မြင်တော့ လက်ထဲက ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်ကို ကြည့်ပြီး “ကောင်း မောင်လေး အဲ့ဒါကဘယ်သွားမှာလဲ” တဲ့ “အပြင်ခဏ မမ” လို့ပြောပြီး ထွက်လာ။ ထွက်လာထဲက ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဆိုင်ကယ်ကို မမသီတာတို့အိမ်ကို ဦးတည်တယ်။ မမသီတာတို့က မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်း ကျနော်တို့က မြောက် ဘက်ပိုင်း။ ဆိုင်ကယ် ၁၅ မိနစ်လောက်တော့ စီးရတယ်။ မမသီတာတို့အိမ်ရောက်တော့ ထဘီရင်လျားနဲ့ ရေစည်ဘေးမှာ ရေချိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ မမသီတာ။ ကျနော့်မြင်တော့ အံ့အားသင့် နေတယ်။ “ကောင်း မောင်လေး ဘာကိစ္စလဲ” တဲ့။ အိမ်ထဲက ဆိုင်ကယ်သံ ကြားလို့ ထွက်လာတဲ့ မမသီတာ အမေကိုပဲ “ဒေါ်လေး မမမြတ်နိူးက ကိစ္စ ရှိလို့တဲ့.. မမသီတာကို လာခေါ်ခိုင်းလို့” ဆိုပြီး ပြော လိုက်တယ်။ မမသီတာ အမေက “သြော် ဟုတ်လား သမီးရေ ရေမြန်မြန် ချိုးပြီး လိုက်သွားလိုက်လေ” တဲ့။
ကျနော့်ကိုလဲ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဟင်းအိုး တန်းလန်းမို့ ဆိုပြီး နောက်ပြန်ဝင် သွားတယ်။ ကျနော် ထိုင်နေရာက မမသီတာ ရေချိုးတဲ့ နေရာကို မြင်နေရတယ်လေ။ ရေစိုလို့ ထဘီက အသားမှာ ကပ်နေတော့ ပကတိ အရှိကို မြင်နေရသလို ဖြစ်နေလေတော့ အောက်က ကောင်က ငေါထွက် လာတယ်။ အသာ ခေါင်းနှိမ်ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ ညှပ်ထား ရတယ်ဗျာ။ မမသီတာလဲ ရေအမြန် ချိုး ပြီး အခန်းထဲဝင် အဝတ်အစားလဲ သနပ်ခါးရေကျဲလေး လိမ်းပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ဟားး လှလိုက်တဲ့ မမရယ်လို့ ရင်ထဲက ဆိုမိ တယ်။ “အမေ သမီး လိုက်သွားလိုက်အုန်းမယ်နော်” “အေး အေး သမီး သွားသွား” သူတို့ သားအမိတွေ အပြန်အလှန် ပြောပြီး မမသီတာက ကျနော့်ဆိုင်ကယ်ရဲ့အနောက်ကို အတက်မှာ မမသီတာဆီက သနပ်ခါးနံ့လေးက နှာဝကို လာပြီး မိတ်ဆက်တယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီလိုပဲ မမမြတ်နိူးက ခေါ်ခိုင်းနေကြ မို့ မမသီတာရော သူ့အမေပါ သံသယ မဖြစ်ကြဘူး။
ကျနော်ကတော့ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ထွက်လာပေမယ့် အခုတကယ် သွားရမယ် ဆိုတော့ ဘယ်သွားရမှန်း မသိဘူး။ ဟိုတယ် သွားဖို့ကလဲ ကျနော်တို့က ဘာမှဖြစ်သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသွားမယ် ဆိုတော့လဲ fb ပေါ်မှာ တွေ့သလို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာကို ညှိးနွမ်းစေတာမို့ မသွားချင်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ ထိုင်မယ် ဆိုပြန်တော့ မမသီတာကို သိတဲ့သူတွေက ဒီမြို့မှာက အများသား။ ကိုယ့် ဟာကို တိုင်ပတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့ရာ စီးနေတော့ “ဟဲ့ ကောင်း ဘယ်တွေ မောင်းနေတာလဲ အိမ် ကို မမောင်းဘဲနဲ့” တဲ့။ အဲ့တော့မှ ကျနော်လဲ “မမ မခေါ်ခိုင်းဘူး ကောင်း ဘာသာ ကောင်း မမကို ပြောစရာ ရှိလို့ ခေါ်လာတာ” “ဟာ ကွာ ကောင်း မကောင်းဘူးကွာ.. အဲ့လို မလုပ်နဲ့ မမကို ပြန်ပို့ပေး” တဲ့။ ရမယ် အားကြီးကြီး။ သူ့ကို ပြောစရာတွေ ပြောချင် လို့ ခေါ်လာတာကိုများ ပြန်ပို့ခိုင်း နေသေးတယ်။ သူ့ကို ပြန်မပြောဘဲ ဦးနှောက်ကို အမြန် အသုံးချ နေရတယ်။ ကြံစမ်း ဘာလုပ်ရမ လဲ ဘယ်သွားရလဲ။ ထွက်စမ်း ထွက်စမ်း အကြံတွေ။ နောက်မှ သတိ သွားရတယ်။ တခြား ဟုတ်ရိုးလား။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆိုင်ကယ် ပြင်ဆိုင်လေးပေါ့။
ထွန်းနိုင်တို့က ဆိုင်နဲ့ အိမ် တွဲထားပေမယ့် အိမ်နဲ့က နည်းနည်း လှမ်းတယ်။ ညဆို ဆိုင်ထဲမှာ ထွန်းနိုင်ပဲ စောင့်အိပ်တာ။ သူ့မိသားစု တွေက အိမ်မကြီးမှာပဲမို့ လွတ်လပ်တယ်လေ။ အာ့နဲ့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကို ဦးတည်လိုက်တယ်။ မမသီတာက “ကောင်း ဘယ်ကို လဲ” တဲ့။ မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ်လေ။ ဆိုင်ရောက်တော့ နေဝင်စ အမှောင် လွှမ်းနေပြီ။ ကျနော့် ဆိုင်ကယ်သံ ကြားတော့ ထွန်းနိုင်က အိမ်ကနေ ထွက်လာတယ်။ “ကောင်း ဘာလိုလို့လဲကွ” တဲ့ ကျနော်လဲ ထွန်းနိုင်လက် ဆွဲပြီး “ဟေ့ကောင် ငါ မမသီတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကား ပြောချင်လို့ဟ မင်းဆိုင်ထဲ ပြောလို့ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား” ဆိုတော့ ဒီကောင်က သဘော ပေါက်တယ်။ “ဘာလို့ မဖြစ်ရမှာလဲ.. နေအုန်း ဆိုင်သော့ သွားယူလိုက်အုန်းမယ်” ဆိုပြီး အိမ်မကြီးဘက် ပြန်သွားတော့ မမသီတာက “ကောင်းရယ် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ.. ငါတော့ နင့်ယုံမိတာ မှားပြီ” တဲ့။ “ဟာ မမကလဲ ခဏလေးပါ မမနဲ့ စကား ပြောချင်လို့ပါ” ဆိုတော့ “ဒုက္ခပါပဲ ကောင်းရယ် မြတ်နိူးနဲ့ ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့ သိရင် မမပဲ အပြစ်ဖြစ်မှာ” လို့ ပူပန်စွာ ပြောတဲ့ မမကို ကြည့်ပြီး သနား နေမိတယ်။ ထွန်းနိုင် ပြန်လာပြီးတော့ ဆိုင်လေး ဖွင့်ပေးတယ်။
“မင်းတို့အေးဆေးနေကွာ” တဲ့ “ကျေးဇူးပဲ” လို့ ပြောပြီး မမသီတာလက်ကို ဆွဲလို့ ဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ် ချက်ထိုးတာ ကို မမသီတာက ကြည့်ရင်း မလုံမလဲ စိုးရိမ်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ပေါ့။ ဆိုင်ထဲမှာက မီးလုံးငယ် တစ်ပွင့်ပဲ ထွန်းထားတာမို့ အလင်း အားနည်းနေတယ်။ မမလက်ကို ဆွဲပြီး ထွန်းနိုင်အိပ်တဲ့ ခုတင်မှာ နှစ်ဦးသား တင်ပါးလွဲ ထိုင်ပြီး မမလက် နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကနေ “မမ ကောင်းကို မချစ်ဘူးလား” လို့မေးတော့ ခေါင်းငုံ့ရင်းကပဲ “ကောင်းရယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ မပြောပါနဲ့လားကွယ်” “မမရယ် ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ.. ကောင်း မမကို ချစ်တယ်” “ဟင့်အင်း မချစ်နဲ့ ကောင်း မမတို့ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရ မှာ” “ဟာ အခု မချစ်ရတာကမှ စိတ်ဆင်းရဲတာ မမရဲ့.. မမကို ကောင်း ချစ်တယ်” လို့ပြောပြီး မမရဲ့မေးလေးကို လက်မ လက်ညှိးနဲ့ ကိုင်လို့ ဆွဲမော့ လိုက်တယ်။ မော့လာတဲ့ မမရဲ့မျက်ဝန်းက ရီဝေလို့ မဟတဟ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ငုံခဲလိုက်မိတော့ “အင်” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်ပြီး ကျနော့်အနမ်းကို ကျေနပ်စွာ ခံယူ နေတယ်။ မမပါးစပ်ထဲ လျှာထည့်ပြီး မွှေတော့ မမကလဲ ပြန်ပြီးတော့ လျှာနဲ့ အတွန်းအထုတ် အစုပ်အဆွဲလုပ်လာတယ်။
ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ဘူး။ နှုတ်ခမ်း နမ်းနေရင်းက မမနို့အုံပေါ်ကို လက်ရောက်ပြီး အပေါ်က ဆုပ်ကြည့်တော့ ဘရာ အပျော့စား လေးကြောင့် အိစက်စက် အရသာကို ထိတွေ့ ခံစားရတယ်။ ခါးကို လက် တစ်ဖက်ကဖက် တစ်ဖက်က နို့ကိုကိုင် နှုတ်ခမ်းကလဲ အ နမ်း မပျက်ပေါ့။ နှစ်ယောက်သား အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလို့ ကာမအဆိပ်တွေ က ငယ်ထိပ် ရောက်နေပြီ။ ကျနော်လဲ အားမရတော့ တာကြောင့် မမရဲ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီ နှိပ်သီးတွေကို တဗြုတ်ဗြုတ် မြည်အောင် ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။ “အို ကောင်း ရယ်” လို့ မမနှုတ်က ရေရွတ်သံလေး ထွက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက် နောက်ကို လျိုလို့ ဘရာချိတ်လေး ဖြုတ်ပေးတယ်။ အချုပ်အနှောင်က လွတ်လာတဲ့ မမ နို့လေးတွေက အပြင်ကို ခုန်အထွက် ကတွဒ်ပေါက်က ဗျိုင်းစောင့်သလို စောင့်နေတဲ့ ကျနော် မမရဲ့နို့သီးလေးကို ပြေးဟပ် လိုက် တယ်။“အာ အာ့ ဟင်းး” ဆိုတဲ့ အသံတွေ မမဆီက ထွက်လာပြီး ရင်ကော့ပြီး နို့ပေးစို့နေတဲ့ မမ တစ်လုံးစို့ တစ်လုံးကိုင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ အရာရာကို မေ့လို့ ကာမ အရသာကို တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း ရှေ့တိုး နေကြတယ်။ ကျနော့်လက်က နို့ကိုင်ရာက တစ်ဆင့် မမရဲ့ပေါင်ကြားဆီကို ဦးတည်လိုက်တယ်။ မိန်းမနဲ့ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မလိုးဖူးပေမယ့် အပြာစာ အပြာ ကားတွေ ကြည့်ထားပြီး မြင်ဆရာ တင်ထားတာမို့ အခု လက်တွေ့လုပ်တော့ နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေသား။
ကျနော်ရဲ့ လက်က မမပေါင်ကြား ဝင်တော့ မမက အတင်း ပေါင်စိထားပြီး ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ကွာ နဲ့ ငြင်းဆန် နေတယ်။ ကျနော် က မုန်ထ နေပြီ အတင်း မမပေါင်ကို ဖြဲပြီး လက်အတင်း ထည့်တော့ နွေးနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်နဲ့ အုပ်မိသွားတယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပေး လိုက်တော့ မမရယ်လေ အီး အားနဲ့ တွန့်တွန့် သွားတာဘဲ။ ကျနော်လဲ လက်ခလည်နဲ့ ထဘီပေါ်ကနေ အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထက်အောက် ဆွဲလိုက်တော့ ကျနော်လက်မှာ တရော် ကင်ပွန်းရည်လို အရည်တွေ လူးကုန်တယ်။ မမ ထန်ပြီး အရည် ထွက်နေတာ။ အဲ့ချိန်မှာ မမ သတိ ဝင်လာတယ်။ ကျနော်သူ့စောက် ဖုတ် နှိုက်နေတဲ့ လက်ကို အတင်း ဖမ်းဆွဲပြီးတော့ “ကောင်း မမကို ချစ်ရင်မလုပ်နဲ့ကွာ” ဆိုပြီး အတင်း ရုန်းတာ။ ကျနော်ကလဲ “အတင်း ချစ်လို့ပါ မမရယ်” နဲ့ အတင်း ပြန်ရုန်းတာ။ နောက်မမက ကျနော်မျက်နှာကို သူ့လက် နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး မော့စေပြီးမှ “ကောင်း မမကို ကြည့်စမ်း.. မမကို ကောင်း ချစ်လား” တဲ့။
“ကျနော်လဲ ချစ်တယ် မမ တအား ချစ်တာ” ဆိုတော့ “အင်း မမလဲ ကောင်းကို ချစ်တယ်.. ဒါပေမယ့် အခုတော့ မမတို့ ဒီလောက်နဲ့ ပဲ တော်ရအောင်နော်.. သူများနေရာမှာ မသင့်တော်ဘူး” လို့ မမက ပြောလာတော့ “မမ တကယ် ကောင်းကို ချစ်လား” ဆိုတော့ “ချစ်တာပေါ့ ကောင်း ရယ် ကောင်းက မမကို ချစ်ရင် မမရဲ့စကား နားထောင် ရမယ်နော်” တဲ့။ ကျနော်လဲ ကလေးငယ်လို ခေါင်း လေး ညိတ်ပြတာပေါ့။ အဲ့တော့ မမက ကျနော့်နဖူးကို ရွှတ်ကနဲ့ မြည်အောင်နမ်းပြီး “လိမ္မာလိုက်တာ အာ့ကြောင့်ကောင်းကို ချစ် တာ ကဲ ကောင်း ပြန်ရအောင်” ဆိုပြီး အဝတ်တွေကို သေသပ်အောင် လုပ်တယ်။ မမ ရဲ့ထဘီ ဖြန့်ဝတ်တော့ အရည်တွေ ကွက်နေ တော့ လှည့် ဝတ်တာကို ကြည့်ပြီး ကျနော်က ရီတော့ လူဆိုးကြောင့် ဆိုပြီး ကျနော်လက်မောင်းကို ဆွဲဆိတ်တယ်။ နာပေမယ့် မနာ သလိုပဲ။ ကျေနပ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပျော်နေမိတယ်။ အဲညက မမကို သူ့အိမ် ပြန်ပို့ပြီး မိုးမမြင် လေမမြင်နဲ့ ပျော်နေခဲ့တယ်။
မမသီတာနဲ့ ကျနော် ချစ်သူတွေသာ ဖြစ်တယ် စကားလေးတောင် နေ့တိုင်း မပြောရဘူး။ ဆိုင်မှာ တွေ့တုန်း မမ မသိအောင် ခိုးပြုံးပြ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခိုးကြည့်။ ဒီလိုပဲ နေနေရတယ်။ ထွန်းနိုင်က မေးတယ်။ “ကောင်း မင်းနဲ့ မင်းမမကဘယ်လိုလဲ” တဲ့ “ဘယ်လိုမှမလဲဘူး မောင်ရေ မင်းဆီလာတဲ့ ညကပဲ နှစ်ယောက် တွေ့ရသေးတယ်” ဆိုတော့ “ကောင်း ရာ တွေ့ဖို့ ကြံအုန်း လေ.. အချစ်ဆိုတာက အမြဲ ထိတွေ့ နေမှကွ.. အနေ ဝေးရင် အေးသွားမယ်” တဲ့။ လောလောဆယ်တော့ အေးလဲ မတတ်နိုင်ဘူး။ တွေ့ဖို့ကလဲ သူလဲ သူ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်က အချိန်ပေးနိုင်တောင် သူက အခြေနေ မပေးနိုင်ဘူး။ မမမြတ်နိူး သိလို့ မရ အိမ်က သိလို့ မရ ဆိုတော့ ပိုဆိုး။ မမနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ တခဏတာ အတွေ့လေးကိုပဲ ပြန်လွမ်း နေရတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ တစ်လ လောက် အကြာမှာတော့ ကျနော့်ကို ကံဆရာက မျက်နှာသာ ပေးလာခဲ့တယ်။ တခြား မဟုတ်ဘူး အမေ့ရွာက ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းမှာ အဖေ အမေတို့က ဇရပ် တစ်ဆောင် လှူဒါန်းထားတာ ဆရာတော်ကြီး မွေးနေ့နဲ့ တိုက်ပြီး ရေစက်ချပွဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ကျနော်က လွဲလို့ အဖေ အမေနဲ့ မမမြတ်နိူးတို့ ရွာကို သုံးရက်လောက် သွားကြမယ်ပေါ့။ မမဆိုင်က ဖောက်သည် အပျက် မ ခံချင်တာမို့ မမသီတာကို ဆက်ဖွင့် ထားဖို့ လွှဲထားခဲ့တယ်လေ။
ဒါက ကျနော့်အတွက် အကွက် ဖြစ်သွားတယ်။ မမ မရှိတော့ မမအစား ဆိုင်ကို ကျနော်က သွားသွား ကြည့်ပေးဖို့ မမမြတ်နိူးက အမှာ ပါးခဲ့တော့ အဆင် ပြေပြီလေ။ ပထမရက်ကတော့ ကျနော် မမကို ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ရင်းပဲ စကား ပြောရတယ်။ ကျနော် မမကို တွေ့ချင်လို့ အတင်း ပူဆာလို့ နောက်ဆုံးတော့ မမက လိုက်လျောပေးတယ်။ နေရာ ကတော့ တခြားနေရာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ အိမ်ပဲပေါ့။ အိမ်ကိုက မမသီတာက မကြာခဏ လာနေကြ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်ဂရုမပြုဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကျနော် သွား ခေါ်လို့တော့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျနော်က ဆိုင်ကို တစ်ရက် ခွင့်တောင်းပြီး အိမ်က စောင့်နေလိုက်တယ်။ မမကတော့ ပုံမပျက် ဆိုင်ဖွင့် ပြီးမှ ကျနော်တို့ အိမ်မှာ အဝတ်စ ယူစရာ ရှိတယ် ဆိုပြီးဘေးက ဆိုင်ကို ဆိုင်အပ်ခဲ့ပြီး အိမ်ကို လာလိုက် အားလုံး ဒေါင့်ကိုစေ့နေ ရော။
မမက ၉ နာရီလောက်မှ လာမယ့်ဟာ မနက် အိပ်ရာထပြီးထဲက ကျနော် ဃဏာ မငြိမ်ဘူး။ ၈ နာရီလောက်ကျတော့ ရေချိုးတယ် ဆပ်ပြာကို အထပ်ထပ်တိုက် ညီလေးကိုလဲ သေသေချာချာ ဆေးကြောလို့ပေါ့ လက်ထဲမှာ ညီလေး ကိုင်ရင်း မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ပြန်မြင်ယောင် လာတယ်။ ဟိုညက အနမ်းတွေ အထိအတွေ့တွေကို ပြန်သတိရတာနဲ့ ထိပ်က အရည်တောင် စို့လာတယ်။ မနေ နိုင်တော့တာနဲ့ တစ်ချီ ပြီးအောင် ထုပလိုက်တယ်။ ၉ နာရီကျော်တော့ ထီးလေး ဆောင်းလို့ မိုးပြာရောင် ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ မမ အိမ်ထဲ ဝင်တာနဲ့ ကျနော် အပေါက်ဝကနေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ပြီး ဘယ်သူမှ မရှိတာနဲ့ တံခါးကို အ မြန်ပိတ် ချက်ထိုး လိုက်တယ်။ ပြီး မမလက်ကို ဆွဲလို့ အပေါ်ထပ် ကျနော့်အခန်းကို ခေါ်လာလိုက်တယ်။ ကျနော့်အခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ မမကိုပွေ့ဖက်လို့ နမ်းရင်း “ချစ်လိုက်တာ မမရယ်” ဆိုတော့ မမက အဖက်မခံဘဲ “နေပါအုန်း ကောင်း ရယ် အဝတ် တွေကြေကုန်မယ်” ဆိုတော့ ကျနော်က “ကြေမှာ ကြောက်ရင် ချွတ်လိုက်လေ မမ” ဆိုတော့ မျက်စောင်း ထိုးပြီး “ဒါမျိုးကျ မ သင်ရဘူး တတ်တယ်” တဲ့။
ပါးစပ်က ပြောပေမယ့် ကျနော့်အလိုတော့ လိုက်ရှာပါတယ်။ မမရဲ့အင်္ကျီနဲ့ ထဘီ ချွတ်လိုက်တော့ မမ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘရာ နီရဲရဲ လေးနဲ့ ပင်တီ ပန်းရောင်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ မမကို ရင်ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး အနမ်းတွေချွေလိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ် ဆွဲတင် လိုက် တယ်။ မမကလဲ စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ် ထင်တယ်။ လူးလွန့်လို့ ခံစားနေတယ်။ မမရဲ့ဘရာလေးကို ချွတ်ပြီး လုံးဝန်းပြီး လှပ တဲ့နို့ကို ကျနော် လျှာကြမ်းနဲ့ အားရပါးရ ဆွဲဆွဲ စုပ်လိုက်တော့ မမလဲ ရှီုးရှီုး ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ရင်ကို ကော့ကော့ ပေးနေတယ်။ မမနို့ လေးက ကလေး မတိုက်ဖူးသေးတာမို့ နို့သီးခေါင်းလေးက သေးသေးလေး အဲ့ နို့သီးလေးကို ငုံလိုက် စို့လိုက် လုပ်ရာကနေ လက်က မမပေါင်ကို ဖြစ်ညှစ်ရင်း ထက်အောက် စုံဆန် သွားနေလိုက်တယ်။ မမ က အတွေ့ကြုံ ရှိပြီးသားမို့ တကယ် ခတ်ကွင်းလဲ ပြင်ရော အိနြေ္ဒသိက္ခာတွေ အကုန် ခွာချလိုက်ပြီး မမလက်က ကျနော့်ပုဆိုးဖြေပြီး လီးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး ထက်အောက် လှုပ်ရှားပေးတော့ မိန်းမရဲ့အထိအတွေ့ မခံဖူးတဲ့ ကျနော့်လီးကြီးက ဒစ်ကြီး ကားလို့ အစွမ်းကုန် ထောင်နေရော။ မမက ကျနော့်ဒစ်ကို သူ့လက်မနဲ့ ပွတ်ပြီး ဝလုံးရေး နေရင်းက “ကောင်း ရယ် မင်းဟာကြီးက မတရားပဲ” တဲ့။
“ဘာမတရားတာလဲ မမ” ဆိုတော့ “ကြီးတာလေ” တဲ့။ “ဟုတ်ရဲ့လား မမရယ် မမ ယောက်ျား လီးနဲ့ ဘယ်သူ ကြီးလဲ” “ဟာ ကြာ” တဲ့။ ရှက်လို့ မဖြေတဲ့ မမကို “ပြောပါ မမကလဲ ဘယ်သူ ကြီးလဲလို့” ထပ်မေးတော့မှ တိုးတိုးလေးနဲ့ “ကောင်းဟာ ကြီး တယ်” တဲ့။ ကျနော်လဲ မမရဲ့ အဖြေ ကြားတော့ ပိုစိတ်ထလာပြီး ကမန်းကတမ်း ထပြီး မမရဲ့ပင်တီကို ဆွဲချွတ်တော့ မမက ချွတ် လွယ်အောင် ဖင်ကို ကြွပေးတယ်။ ပင်တီလေး ကျွတ်သွားတာနဲ့ အမွှေး မဲမဲလေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရ တာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုက အထွတ်အထိပ် ရောက်ပြီး ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲလိုက်တော့ အစိ ပြူး ပြူးနဲ့ ကာမရေကြည်တွေ ရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကုန်းပြီး လျှာနဲ့ လျက်လိုက်တော့ “အို အေမ့” ဆိုပြီး တွန့်သွားပြီး မမက သူ့စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့ အတင်း အုပ်ပြီး “ကောင်း မလုပ်နဲ့ကွာ ရွံစရာကြီး” တဲ့။ “ရွံပါဘူး မမကလဲ မမကို ကောင်းစေချင်လို့” ပြောလဲပြော မမလက်ကို အတင်း ဖယ်ပြီး အစိ ပြူးပြူးကြီးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်။ ညှီစို့စို့ အနံ့ နဲ့ ငံကျိကျိ အရသာ ကို ခံစားလိုက်ရပေမယ့် မမကို ကောင်းစေချင်တာရယ် ကြည့်ထားတဲ့ အပြာကား ထဲက ပညာတွေကို လက်တွေ့ အသုံးချ ကြည့်ချင်တာနဲ့ပဲ မနားတန်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျှာပြားကြီးနဲ့ လျက်လိုက် လျှာနဲ့ အထဲကို ရောက်နိုင်သမျှ ထိုးထည့်ပြီး ကစား ပေးလိုက်တယ်။
မမကလဲ ကာမစည်းစိမ်ကို မျက်လုံး စုံမှိတ် ကျနော့် ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ပြီး တအီးအီး တအားအားနဲ့ပေါ့။ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ “မမ ကောင်း ချစ်ချင်ပြီ။ ချစ်ချင်ပြီလို့” အသံတွေတုန် ရင်တွေခုန်ရင်း ပြောလိုက်တော့ မမက “ကောင်း ချစ်ချင် ချစ်လေ ချစ်လေ” ဆိုပြီး ဒူးထောင်ပြီး ပေါင်ကား ပေးထားတော့ ကျနော်လဲ ပေါင်ကြား ဝင်ပြီး မမစောက်ဖုတ်ဝ ကို လီးတေ့ပြီး ဆောင့်ထိုး လိုက်တယ်။ အာ့ အ လို့ မမဆီက အသံ ထွက်လာတယ်။ ကျနော် ထိုးသွင်း လိုက်တာက အထဲ မဝင်ဘဲ အပေါ်ကို ချော်ပြီး မမအစိကို ကလော် ထိုးသလို ဖြစ်သွားတာလေ။ မမက ချော်သွားတဲ့ ကျနော့်လီးကို သူကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး အဝကို ပြန်တေ့ ပေးတယ်။ ကျနော်လဲ ခါးအားနဲ့ နောက်တစ်ခါ ဆောင့်ထဲ့ လိုက်တော့ ဗြွတ် ဆို ဝင်သွားတယ် လီးတလျှောက်လုံး မကြုံ ဖူး တဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ နွေးထွေး တင်းကြပ်မှု အရသာကို ခံစားလိုက်ရသလို မမကလဲ “အမလေး သေပါပြီ ကောင်းရယ် တအား လုပ်ရလားဟဲ့” ဆိုတဲ့ အသံလဲ ကြားရော ကျနော့်စိတ်က ပိုထန်လာပြီး မမစောက်ဖုတ်ကို အတင်း ဆောင့်ပစ်လိုက်တာ ဆယ်ချက် ကျော်ကျော် လောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်တယ် လီးတလျှောက် ကျဉ်သလိုလို ဖြစ်လာပြီး လီးရေတွေ ပန်းထွက်သွားတော့ လီးကို မမ စောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံး ထိုးထည့်ပြီး အတင်း ကပ်ထားလိုက်တယ်။
မမက လင်ရဖူးတော့ ကျနော့် အခြေအနေကို သိတယ်။ ကျနော့်ဖင်တွေကို လက်နှစ်ဖက် ဆွဲပြီး ကပ်ထား ပေးတယ်။ နှစ်ယောက် သား ခဏ ငြိမ်နေပြီ အရသာ ခံနေကြတယ်။ မမက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ငြိမ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတဲ့ ကျနော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွဖွလေး သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားရင်းက “ကောင်း မမကို ချစ်ရတာ ကောင်းလား” လို့ မေးတော မမပါး နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာ တ ရွှတ်ရွှတ် နမ်း ရင်း “ကောင်းတယ် မမ တအား ကောင်းတာပဲ မမရော ကောင်းလားဟင်” ဆိုတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး “အင်းး” တဲ့ “မမ ကောင်းလုပ်တာ ခဏလေးနော်” ဆိုတော့ “အော် အာ့က ကောင်းကမှ မလုပ်ဖူးသေးတာ နောက်ကျရင် ကြာမှာပေါ့” ဆိုတော့ “မမ ကောင်း ထပ်ချစ်အုန်းမှာနော် မဝသေးဘူး” ဆိုတော့၊ “သဘော သဘော ကောင်းသဘော မမတော့ မှားပြီထင်တယ်” တဲ့။ “မမက ဘာမှားလို့” ဆိုတော့ “မှားတာပေါ့ ကောင်းရယ် ကောင်းက မမထက် အများကြီး ငယ်တယ် နောက်လူပျိုလေး မမက မုဆိုးမလေ” “ဟင့်အင်း ကောင်း အာ့တွေ မသိဘူး မမကို ချစ်တာပဲ သိတယ်.. မမရော ကောင်းကို မချစ်ဘူးလား” “အော် ကောင်း လေးရယ် ကောင်းလေးကို ချစ်လို့ ခုလို အလိုလိုက်မိတာပေါ့” တဲ့။
“မမ ကောင်းကို တကယ် ချစ်တာနော် မညာရဘူး” “မညာပါဘူး ကောင်း ရယ် နေပါအုန်း ကောင်းရော မမကို ဘယ်တုန်း က စချစ် တာလဲ” လို့မေးတော့ မမမျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်းက “ဟိုလေ မမ ကောင်းကို လာပြတုန်းက” လို့ပြောတော့ မမ တစ် ယောက် မျက်မှောင်လေး ကြုတ်ပြီး စဉ်းစားပြီး “နေပါအုန်း မမကဘာလာ ပြတာလဲ” တဲ့။ အဲ့တော့မှ ကျနော်လဲ ဟီးးး ဆိုရီပြီး “စံပါယ်ရုံနားမှာ လာပြတာလေ” ဆိုတော့မှ သဘော ပေါက်ပြီး “ဟာ ကောင်း ကွာ မကောင်းဘူး တော်တော် ဆိုးတယ်” တဲ့။ “ဟားဟား မဟုတ်ဘူးလား ကောင်းကို လာပြတာလေ” ဆိုတော့ ကျနော့်လက်မောင်းကို မနာအောင် ဆွဲကိုက်ပြီး “သွားးအဲ့နေ့က ရှက်လိုက်တာ မပြောနဲ့” တဲ့။ ပြောဆို နေရင်းက စိတ်ပြန်ထ လာတော့ “မမ ချစ်အုန်းမယ်နော်” ဆိုတော့ မမက ခေါင်းညိတ် ပြ တယ်။ “မမ ကောင်း အောက်ကနေမယ်” ဆိုတော့ “အင်းပါ” တဲ့။ ကျနော် အောက်က ပက်လက် လှန်အိပ်ပေးတော့ မမက အပေါ် က ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က လီးကို ကိုင်ပြီး အဝတေ့ပြီး အသာ ဖိသွင်းတယ်။ “အာ ကောင်းရယ် မင်းဟာက ကြီး တယ်ကွာ” တဲ့။ “ကြီးတာ မကောင်းလို့လား မမ” ဆိုတော့ “နာတယ်ကွ” တဲ့။ အဲ့အသံလဲ ကြားရော မမခါးကို ကိုင်ပြီးတော့ အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့် လိုက်တယ်။
“အား သေပီ ကောင်းရယ် သူ့အသား မဟုတ်တိုင်း” တဲ့။ မျက်နှာလေး ရှူံ့လို့ ပြောနေတဲ့ မမကို ကာမစိတ်တွေ ထန်နေတဲ့ ကျနော် ဘာမှ မပြောဘဲ အတင်း အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့် နေတော့တာပဲ။ မမကလဲ ပြန်ဆောင့် လိုးပေးတယ်။ ကျနော်ရဲ့အဆောင့် နားချိန် ဆို မမက ကြိတ်ပြီး ပွတ်တာ ခံလို့ ကောင်းလိုက်တာ။ လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိ ထည့်ပြီး ဝိုက်ဝိုက်ပြီး ကြိတ်တာက မမအစိ ကိုချေသလိုမို့ ထင်တယ် မမ တအား ကြိုက်ပုံပဲ။ မမနဲ့ ကျနော် အဲ့နေ့က သုံးချီ သုံးလား လိုးကြတယ်။ ပြီးရေမိုးချိုးပြီး မမမြတ်နိူးရဲ့ မှန်တင်ခုံက ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီး မမလဲ ဆိုင်ကို ပြန်တယ်။ နောက်မို့ဆို ကျနော် ကြမ်း ထားလို့ မျက်နှာမှာ လိမ်းထားတဲ့ မှုန် နံ့သာတွေ တစ်စက်မှ မကျန်ဘူးလေ။
နောက်နေ့မှာပဲ အဖေတို့ ပြန်ရောက် လာပြီး မမနဲ့ ကျနော် ဆုံဖို့ အခွင့်ရေး မရသလို မမလဲ သူ့အိမ်က သဘောတူတဲ့ လူနဲ့ လက်ထပ် ပြီး သူ့ယောက်ျား တာဝန်ကျတဲ့ မြို့ကို လိုက်သွားလို့ ကျနော့်ရဲ့ အချစ်ဦးဆိုဆို ကာမ အစ ပြောပြော မမနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ပြည့်ဖုံး ကားလေး ချလိုက် ရပါတော့တယ်။ ကာလတွေ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ပိတောက်ရိပ်နဲ့ စံပါယ်ရုံလေးနား ရောက်ရင်တော့ ရင်ခုန် သံ စည်းချက် ခပ်သွက်သွက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မမနဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို သတိရ နေမိတယ် ဆိုတာကို ဒီနေရာကနေ ဝန်ခံ လိုက်ပါ တယ် ခင်ဗျာ။ ။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကောငျးခဈြတဲ့မမ